ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ယောက်ျားဘသားဆိုသူများသို့ပေးစာ
အနာဂတ်တိုင်းပြည်ဧ။် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထုဆစ်ပုံဖော်ကြမည့် တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်များ၊ ခေါင်းဆောင် လောင်းများ ဖြစ်ကြသော အဘိုးအရွယ်၊ အဖေအရွယ်၊ အစ်ကိုအရွယ်၊ မောင်အရွယ် ရှိကြသော ယောက်ျား ဘသား များကို မြေး အရွယ်၊ သမီးအရွယ်၊ နှမငယ် အရွယ်၊ အမကြီး အရွယ် ရှိသောကျွန်မက မိမိဧ။် ဆွေမျိုး ရင်းချာ သဖွယ် သဘော ထားကာ မိမိဧ။် မိသားစု ၀င်များကို မိမိမှ ဖြစ်စေ လိုသော အနေအထား၊ ရှိစေ လိုသော အရည်အချင်း များကို အကြံပြု ဆွေးနွေး လိုက်ရ ပါသည်ရှင့်။ စာရှု သူများ အနေဖြင့် မိမိဧ။် မိသားစုဝင် တစ်ဦးမှ အကြံ ပြုစာဟု သဘောထားပြီး ဖတ်ကြ စေလို ပါသည်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် အနေဖြင့် မြင်သမျှ၊ တွေးနိုင် သမျှ ကိုသာ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်ရှင့်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာတလွှားတွင်ဖြစ်စေ၊ တိုင်းပြည် တပြည်ဧ။် လုပ်ငန်း တာဝန် အရပ်ရပ်ကို ထမ်းရွက် နေကြ သည်မှာ ယောက်ျား များမှာ အများစု ဖြစ်နေ ကြပြီး မိန်းမ အများစု မှာမူ အိမ်တွင်း အလုပ် များကို လုပ်ကိုင်ရင်း ဘ၀ကို ရှင်သန် ကြရ လေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီး အခွင့် အရေးများ မည်မျှပင် တိုးတက် တောင်းဆို နေကြစေကာမူ လူ့ သမိုင်း သက်တမ်း တလျှောက်လုံး တွင်ကျယ်စွာ နေရာ ယူထား ကြသည့် ယောက်ျား များသည် တိုင်းပြည်ဧ။် အခန်း ကဏ္ဍ များကို မြင်နိုင်သော အနာဂတ် ကာလ များအထိ ရာခိုင်နှုန်း များစွာ တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင် နေကြရ ဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုယောက်ျား သားများ လူရည် လူသွေး မြင့်မား ပါမှ တိုင်းပြည် သည် ခွန်အား ရှိပေမည်။ ပြည့်ခွန်အား ဖြစ်သော ယောက်ျား များသည် သာမန် မျှသာဘ၀ကို ရှင်သန် ရုန်းကန် သင့်ကြသည် မဟုတ်ပါ။ မိမိဧ။် လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံနှင့် အရည်အသွေးများ အားလုံးသည် မိမိ တိုင်းပြည်ဧ။် တိုးတက်မှုကို ထည့်ဝင် ကိုယ်စားပြု နေသည်ကို သတိထား သင့်လေသည်။
လူဆိုသည်မှာ လူကြီးဘ၀ရောက်လျှင် အမှားလုပ်မိလျှင် ခွင့်လွှတ်ခံရနိုင်မှု အခွင့်အလမ်း နည်းသွားသည်။ လူကြီး ဖြစ်လျက် သည်လောက်တောင် မသိရ ကောင်းလား ဟု လူငယ် များမှပင် ပြစ်တင် ခံရတတ် ကြသည်။ ထို့ပြင် လူကြီး ဘ၀ ရောက်လျှင် အလုပ်များ ကိုသာ မလုပ်မဖြစ် လုပ်ကိုင် ကြရသည် ဖြစ်ရာ လေ့လာ သင်ယူ ရန်၊ အမှား အမှန်ကို ခွဲခြား ဝေဖန် သုံးသပ် တွေးခေါ်ရန် လူငယ် ဘ၀ မှာလောက် အချိန် မရနိုင်။ လူငယ် ဘ၀ ကပင် လေ့လာ သင်ယူပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆ ခံကြ ရသည်။ လူကြီး ဘ၀ ရောက်ပါက လူကြီး အဖြစ် အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင် ချိန်တွင် အမှား နည်းအောင်၊ လူကြီး အလုပ် များကို ပြောင်မြောက်စွာ အောင်မြင်အောင် ထမ်းဆောင် နိုင်စေရေး အတွက် အရည်အချင်း များကို ဆယ်ကျော်သက် ရွယ်ပိုင်းမှ မောင်ငယ် များမှာ လူကြီးဖြစ်ရန် အားပျိုးကာစ အချိန်၊ လူငယ်များ ဘ၀ ကတည်းက ဖြည့်ဆည်း ထားသင့် ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါလျက် ငါတို့က လူငယ် များမို့ ဘာလုပ်လုပ် တင့်တယ်သည် ဆိုကာ ပျော်ပါး ပေါ့တန်စွာ နေထိုင်ခြင်း သည် လွန်စွာမှ မှားယွင်းသော အတွေးအခေါ် ဖြစ်လေသည်။ သည်အမှုသည် မိမိဧ။် ရှားပါး လှသည့် အပြင် ပြန်လည် အစားထိုး အသုံးချ မရ နိုင်သော အခွင့်အလမ်း များကို ဖြုန်းတီး ပစ်သည်နှင့် တူလေသည်။ တကယ် တော့ လူငယ် များသည် လူကြီး ဘ၀တွင် အောင်မြင်သော လူများ ဖြစ်လာ နိုင်စေရန်၊ လူကြီး အလုပ် များကို အားကြိုး မာန်တက် လုပ်ကိုင် နိုင်စေရန် အတွက် လူငယ် ဘ၀ကပင် ဗလငါးတန်နှင့် ပြည့်စုံ နေသင့်ပါသည်။ ဗလငါးတန် ဆိုသည်မှာ ကာယဗလ မောင်များ ပိုင်ဆိုင်သော ကြွက်သား များနှင့် ဗလကို ဆိုလိုသည် မဟုတ် ပါ။ ဗလ ဆိုသည်မှာ အားကို ဆိုလိုပါသည်။ ဗလငါးတန် တဖြစ်လဲ အားငါးပါး ဆိုသည်မှာ ကာယအား၊ ဉာဏ အား၊ စာရိတ္တအား၊ စစ်မှန်သော မိတ်စစ် ဆွေစစ် များဧ။် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး အကြံပြု မှုအား၊ အမှားအမှန် ကို ခွဲခြား ဝေဖန် ပိုင်းဖြတ် နိုင်မှု အသိဉာဏ်နှင့် အမှန်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လက်ခံ နိုင်လောက်သော၊ အမှား ကိုလည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ၀န်ခံကာ အမှန်ကို ပြန်ရောက် ပြုပြင် နိုင်လောက်သော စိတ်ဓာတ် ခွန်အား များကို ဆိုလို ပါသည်။ မိမိဧ။် မောင်ငယ် များကို ထိုဗလငါးတန်နှင့် ပြည့်ဝ နေစေ ချင်ပါသည်။ အတွေး အခေါ်ပိုင်း၊ စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်မှု စွမ်းရည်ပိုင်း၊ အတတ် ပညာပိုင်း၊ အသိ ပညာ ပိုင်းနှင့် ဗဟုသုတ ပိုင်းတွင်ပါ အရည်အချင်း ပြည့်ဝ လှသော မောင်ငယ် များကို မြင်ချင်စမ်း ပါဘိ။
မောင်ငယ်များ သည်လိုဗလငါးတန်နှင့် ပြည့်စုံစေရန်ကြိုးစားအားထုတ်ရာတွင် အဓိပ္ပာယ်ကောက် မမှားရန် သတိပြုရပေမည်။ အထူးသဖြင့် စစ်မှန်သော မိတ်ဆွေ ဆိုသည်ကို သတိထား သင့်လေသည်။ သည်နေရာတွင် မိတ်ဆွေစစ် ဆိုသည်မှာ သည်ကိစ္စကို လုပ်လျှင် မိမိ ဒုက္မ္ခ ရောက်နိုင် သည်ကို သိလျက် မိမိ အလိုကို လိုက်သော သူကို မိတ်ဆွေစစ် ဟုမခေါ်၊ မိမိကို စေတနာ ထား ဟန်ဆောင်ကာ၊ ကူညီ ယောင်ပြု ကာ ချောက်တွန်း တတ်သူကို မိတ်ဆွေစစ် ဟုမခေါ်၊ မိမိဧ။် အမုန်း ကိုပင် ခံသင့်လျှင် ခံကာ မိမိကို အန္တရာယ် မှ လွတ်အောင် တားသူ ကိုသာ မိတ်ဆွေစစ် ဟုခေါ် လေသည်။ သို့ရာတွင် တခု သတိထား သင့်သည်မှာ အမုန်းခံကာ တားဟန်ဆောင်လျက် မိမိ အကျိုးကို ပျက်စီးအောင် လုပ်တတ်သော ဗဟုသုတ များသော ကောက်ကျစ်သူ ကိုပင် ဖြစ်လေသည်။ မိမိဧ။် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အခြေအနေ မှန်ကို မြင်အောင် ကြည့်လျက် အဖြစ်မှန်ကို သုံးသပ် သင့်လေသည်။ သည်နေရာတွင် သူငယ်ချင်း များစွာ ရှိသည်ကို မိတ်ဆွေ အင်အား ကောင်းသည်ဟု သုံးသပ်လို့ မရနိုင်ပါ။ အများ ညီညွတ်စွာ ဤကို ကျွဲဟု ဖတ်နေသောကြောင့် ရောယောင်ကာ ကျွဲဟု ဖတ်ပေးရင်း များလာသော သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ များကို ထည့်ရေတွက်ကာ မိတ်ဆွေ အင်အား များနေပြီဟု မထင်သင့် ပါချေ။ ထိုသူများနှင့် ရောကာ ပေါင်းရင်း အတုခိုး မမှားစေချင်၊ တလွဲ ဆံပင်ကောင်း မဖြစ်စေ ချင်ပါ။
ရှေးခေတ်ကပင်လျှင် မြန်မာအမျိုးသား လူငယ်များ အားလုံး တို့သည် အဌာရသ တစ်ဆယ့် ရှစ်ရပ် တို့ကို မဖြစ်မနေ တတ်မြောက် သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း ခံကြရ ပါသည်။ ဆင်စီး၊ မြင်းစီး၊ ဒါးရေး၊ လှံရေး၊ ဆေးကု၊ ဗေဒင် ဟောခြင်း၊ မျက်လှည့် ပြခြင်း မှအစ ပြုကာ သံရေး တမန်ရေး စကား ပြောဆိုခြင်း မှသည် အုပ်ချုပ်မှု နည်း ပညာ အထိ ပညာ ရပ်ပေါင်း တစ်ဆယ့် ရှစ်ရပ် တို့ကို သူ့ခေတ်နှင့် အညီ တတ်မြောက်ရ လေသည်။ ယနေ့ ခေတ်နှင့် ဆိုရသော် ယောက်ျား ပီပီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန် သင့်တော်ရာ သိုင်းပညာ တစ်ရပ်၊ ယာဉ်မောင်းခြင်း၊ မျက်လှည့် မပြ လျှင်တောင် သူတပါးက မိမိကို မျက်စိ လှည့်စား လိမ်ညာ မခံရဘဲ မျက်စိ လျင်အောင် လေ့ကျင့်ခြင်း မှစကာ ခေတ်ပညာရပ် များကို တတ်မြောက် ပါမှ တကယ် ယောက်ျား ပီသ သည်ဟု သတ်မှတ် ခံရ ပေမည်။ ယခုခေတ် သတ်မှတ်ချက် လွဲနေသလို အရက် သောက်ပြမှ၊ စီးကရက် တဖွာဖွာ၊ ဆိုင်ကယ် တဖုန်းဖုန်း၊ မော်တော်ကား တစ်ဝီ၀ီ၊ ဗလ တကားကား၊ ရှိုးတများများ လုပ်ပြ နေသည်ကို ယောက်ျား အစစ် ပီသသည်ဟု မခေါ်ဆို နိုင်ပါချေ။ ယင်းမှာ လမ်းသရဲ အစစ် ပီသခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မောင်ငယ် များကို ယောက်ျား စင်စစ် အပီသကြီး ပီသစေချင် လှပါသည်။
လူပျိုပေါက်စ ပျော်ပျော်ပါးပါး မောင်ငယ်များသို့
တစ်ချိန်က မတော်တဆ ကြားခဲ့ရဖူးသော စကား တစ်ခွန်းကို မဟာ ယောက်ျား ကြီးများကို ပြန်ပြောရင်း စဉ်းစား စေချင်ပါသည်။ ကာလသား ခေါင်းက ကာလသား လူငယ် များကို သင်ပေး နေသော ပိုးပန်း နည်းများ မည်သို့ ရှိသည်ကို မိန်းမများ မသိဟု မထင်ပါနှင့်။ ထိုကာလသား ကြီးများသည် မကောင်း သည်ကို လူငယ် များအား သင်ကြား ပေးမည့် အစား လူငယ် များဧ။် ဘ၀ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း သင်ခန်းစာ ကောင်း များကို ယင်းတို့ဧ။် အတွေ့ အကြုံနှင့် နှိုင်းယှဉ် သင်ကြား ပေးသင့် ပါလျက် မကောင်း သည်များ ကိုသာ သင်ကြား ပေးကြ ခြင်းမှာ ယင်းတို့ ကိုယ်တိုင်က မကောင်း သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူကောင်း များနေ ပါက သူတို့ တွင်ကျယ်ခွင့် မရမည်ကို စိုးရိမ် သောကြောင့် လူမိုက်ဂိုဏ်း အင်အား တောင့်အောင် တမင် လုပ်သည်ဟု ယူဆ ရလေသည်။ သည်လို လူမျိုးကို ဆရာ တင်သင့် မတင်သင့် ခွဲခြား သိရ လောက်အောင် မောင်ငယ်များ အသိဉာဏ် ရင့်စေ ချင်ပါသည်။ ယောက်ျားကြာဟု ဆိုသော ထိုကြာမျိုး ငါးပါးကား ကြာဖြူ ကြာနီ စသော ကြာပန်းတို့ မဟုတ်။ မိန်းကလေး များကို လိင်စိတ် ပေါ်လာအောင် သိမ်မွေ့စွာ ဆွဲဆောင် နည်းများ ပင်ဖြစ် ပါသည်။ မခို့ တရို့ကြာ၊ အုံ့ပုန်းကြာ၊ မျှော်တော် ယောင်ကြာ၊ သမာဓိကြာနှင့် အကြွားကြာ တို့ ဖြစ်လေသည်။ မိန်းကလေးများ ယင်းတို့ကို အားကိုးချင် လာအောင် အကြွားကြာ ကိုသုံး၊ ကိုယ့်ထက် ငယ်လို့ ကိုယ့် တပည့် ဖြစ်နေလို့ စသည်ဖြင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ပြောလို့ မရသည့် အခြေအနေတွင် သမာဓိကြီး တခွဲသားဖြင့် လူရှေ့ တွင်နေ ပြရင်း ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ အချက်ပြ တတ်သည့် ကြာမျိုး သည်ကား သမာဓိကြာ၊ လူအေး လူရိုး အဖြစ် ဟန်ဆောင် နေထိုင် ပြနေခြင်း သည်ကား မခို့တရို့ကြာ၊ ချစ်လျက် အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် ဖွင့်မပြော နိုင်ဟန် မိမိ ကိုယ်ကို မိန်းကလေးက မချင့်မရဲ ဖြစ်လာအောင် လုပ်သော ဟန်ကား အုံ့ပုန်းကြာ၊ မိမိတွင် ရည်းစား၊ အိမ်ထောင် ရှိလျက် နောက်အသစ် ရှာလိုသူ များမူကား မိမိဧ။် ရည်းစား အိမ်ထောင်ဘက် တို့က သူ့အပေါ် တွင် မကောင်းလွန်း သော်လည်း မိမိက ထိုသူ ကိုပင် ခွင့်လွှတ် ချစ်ဖြင့် လွန်မင်းစွာ ချစ်တတ်လေ ဟန်ဆောင်ကာ ကိုယ့်ကို သနားလာပြီး ကိုယ့်ကိုပင် အချစ် ကြီးသူ အဖြစ် လေးစား ချစ်ခင် လာအောင် လမ်းကြောင်းဟန် များသည်ကား မျှော်တော် ယောင်ကြာ တို့ဖြစ် လေသည်။ ထို့ပြင် အချို့သော မဟာ ယောက်ျားကြီး များဧ။် လွန်မင်းစွာ စက်ဆုပ် ရွံ့ရှာဖွယ် ကောင်းသော ပိုးပန်း ရခြင်း အကြောင်းရင်း များလည်း ရှိသေး သည်။ လမ်းကြုံပိုး၊ အပျော်ပိုး၊ လောင်းကြေးပိုး၊ မာန ချိုးချင်လို့ ပိုးပန်းခြင်း၊ အခွင့်အရေး လိုချင်လို့ ပိုးပန်းခြင်း၊ သတင်း နှိုက်ချင်လို့ ပိုးပန်းခြင်း၊ ထိုမိန်းကလေး ပိုင်ဆိုင်သော စည်းစိမ် ဥစ္စာ၊ ကျော်ကြားမှု တို့ကို မက်မော သောကြောင့် ပိုးပန်းခြင်း၊ ထိုမိန်းကလေးဧ။် နောက်ခံ ဆွေမျိုး သားချင်းဧ။် ရာထူး အာဏာကို မက်မော သောကြောင့် ပိုးပန်းခြင်း စသည့် ယောက်ျား မတန်မဲ့ အောက်တန်း ကျသော အလုပ် များကို လုပ်ကြ ချေရာ ထိုသို့ ယောက်ျား ဈေးဖျက် သူများကြောင့် မိန်းကလေးများ ကလည်း သူတို့တောင် မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားလို့ နာမည်ခံ ထားလျက်နဲ့ သည်လို လုပ်သေးရင် သူတို့က ယုတ်နိမ့် တယ်လို့ နှိမ်ထား ခံရတဲ့ ငါတို့ မိန်းကလေး တွေက ဘာမှ စောင့်စည်း စရာ မလိုဟု တွေးခဲ့သည် ရှိသော်... ထိုသူမ တို့နှင့် ဆုံဆည်း ခဲ့သည် ရှိသော်... ယောက်ျား ဖြစ်နေသော ဘ၀မို့ မိမိ ရင်သွေး အစစ်ကို ချီပိုး ယုယ ခွင့်သည် ထိုသူမတို့ အပေါ်တွင် မူတည် ပေသည်။ သူတပါးကို ကိုယ်က ဖျက်ဆီးလျှင် ကိုယ်တိုင်လည်း ပျက်စီး တတ်လေသည်။ ထို့ပြင် မိန်းကလေး များကို ဖျက်ဆီး သူသည် လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖျက်ဆီး ရာလည်း ရောက်ပါသည်။ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိန်းမဧ။် အခန်း ကဏ္ဍ သည်လည်း အရေးကြီးသော အခန်း ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အဆုံး ဆိုရသော် မိမိ တို့ဧ။် မိခင် တိုင်းသည် မိန်းမ ဖြစ်ပါသည်။ အမေ မရှိသော ဖန်ပြွန် သန္ဓေသား မပေါ်သေး ပါချေ။ မိန်းကလေးကို ဖျက်ဆီး ခြင်းသည် မိခင် လောင်းကို ဖျက်ဆီးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူတပါးဧ။် မိခင် လောင်းကို ဖျက်ဆီး သူများသည် ယင်းတို့ ကိုယ်တိုင်ဧ။် မိခင်ကို သူတပါးက ဖျက်ဆီး သည်ကို ခံရလျှင် မည်သို့ ခံစား ရမည်နည်း။ ကိုယ်ချင်း စာစိတ် တစ်ချက် ထားစေ ချင်ပါသည်။ မိမိဧ။် ဖခင် ကိုရော မည်သို့သော ဖခင်မျိုး ဖြစ်စေချင် ပါသနည်း။ မိမိ ကရော မိမိဧ။် ရင်သွေး အတွက် မည်သို့သော ဖခင် ဖြစ်ချင် ပါသနည်း။ မိမိရင်သွေးက မိမိကို မည်သို့ တွေးထင် အားကိုး ရိုသေ စေချင် ပါသနည်း။ ကြီးလာရင် လူပျိုကြီး လုပ်မယ်လို့ ကြွေးကြော် ကြီးပြင်း လာသော ယောက်ျား အလွန်ရှား ပါသည်။ ဖခင် လောင်းတို့ ကြပ်ကြပ် စဉ်းစား စေချင် ပါသည်။
ထို့ပြင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ မာယာပြိုင်ရင်း အချိန်ကုန် ခံရမည့် အစား အချိန်ကို အကျိုး ရှိရှိ အသုံးချရင်း အရွယ် မတိုင်မီ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် မရပ်တည်နိုင်၊ အိမ်ထောင် တစ်ခု မတည်ထောင် နိုင်မီ ရည်းစား အပျော် ထားရင်း နယ်ကျော် စည်းကျော် မဖြစ်စေ ရန်လည်း စည်းစောင့်ရင်း ယောက်ျားမြတ် အဖြစ် မိမိ ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူ စေချင် ပါသည်။ တစ်ဗိုက်ပြီး တစ်ဗိုက် ဖျက်ချ နေရ သည်မှာ ဂုဏ်ယူ ရမည့် ကိစ္စ တစ်ရပ် မဟုတ်။ လွန်စွာ စက်ဆုပ် ရွံ့ရှာဖွယ် ကောင်းသော တာဝန် ယူစိတ် မရှိ လူမဆန်သော မိမိရင်သွေး ကို မိမိ ကိုယ်တိုင် သတ်သော အမှု ဖြစ်ပါသည်။ ငယ်လွန်း သေးလို့ အသက် မရှိပါဟု ဆိုလျှင် ခြင်မဖြစ်ခင် ပိုးလောက် လန်းပင် အသက်ရှိ သေးလျှင် ပိုးလောက်လမ်း အရွယ် သန္ဓေသား သည်လည်း အသက် ရှိမည် သာဖြစ် ပါသည်။ ငရဲမှာ အပ၊ ၀ဋ်မှာ အမြဲ ပါတည်း။ မြာစွံ ခြင်းသည် မက်မက် စက်စက် ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းသည့် အမှု မဟုတ် ပါချေ။ မိန်းကလေး ဖြစ်လျက် သိက္ခာ မစောင့်ဘဲ မိမိကို ကြာပေး အခွင့်အရေး ပေးသော မိန်းမသည် ဘာကြောင့် သည်လို လုပ်သည် ကိုဆက် စဉ်းစား စေချင်ပါသည်။ ထို့နောက် မိမိကို သည်လို လုပ်လျှင် ကျန်သူ များကိုရော မည်သို့ လုပ်မည်ကို ဆက်စပ် စဉ်းစား စေချင်ပါသည်
ကိုယ့်မိန်းမ ပထမဆုံး ကလေးမွေးတာနဲ့ နောက်မိန်းမ (မယားငယ်) လိုချင်တဲ့ရောဂါဟာ သည်နေ့ ဖခင်ပေါက်စတွေရဲ့ ကူးစက်ရောဂါတစ်ရပ် ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့သားသမီးအပေါ် ဖခင်မေတ္တာနဲ့ လူလားမြောက်အောင် ဘယ်လို ပြုစု ပျိုးထောင် မလဲ ဆိုတာ မစဉ်းစားဘဲ မွေးကာစ ကလေး အမေမို့ အလှ မပြင်အား အောင် အလုပ် ရှုပ်နေတဲ့ မိန်းမကို မလှ တော့လို့၊ ဆွဲဆောင်မှု မရှိတော့လို့ မချစ်နိုင်တော့ဘဲ နောက်မိန်းမ လိုချင်တယ် ဆိုတာ လူမဆန်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းမြစ်တာ၊ ကောင်းရာ ညွှန်လတ်၊ အတတ် သင်စေ၊ ပေးဝေနှီးရင်း၊ ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုတဲ့ ဖခင် ကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ နေထိုင် ကျင့်ကြံဖို့ မကြိုးစားဘဲ အာရုံငါးပါး ကိုသာ ခံစား လိုပါလျှင် သည်လို ဖခင်များ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးထဲ ပါဝင်မည် မထင်ပါနဲ့၊ ရတနာသုံးပါးနဲ့ တန်းတူ နေရာပေး ခံရတာ ဖခင်ဝတ္တရားကို ကျေပွန်သူ များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှိခိုးတယ် ဆိုတာ ဘာကြောင့် ရှိခိုးရသလဲ ဆိုတော့ မိမိကို နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း လမ်းကိုညွှန်ပြလို့ကျေးဇူးတင်လို့လို့ မိုးကုတ်ဆရာတော် ကဆိုပါတယ်။
အပြောကျယ်တဲ့လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ်ဆိုတာ နှိုင်းရသဘော ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရ တနေ့တခြား ပိုခက်လာ နေတဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်သားသမီး တွေကို အမှန်အတိုင်း မကောင်း မြစ်တာ၊ ကောင်းရာ ညွှန်တတ် ဖို့ဟာ မလွယ်လှပါဘူး။ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဗီဇ၊ ၀ါသနာတွေနဲ့ရော၊ ခေတ်နဲ့ပါ ကိုက်ညီမယ့် ဘယ်လို အတတ်ပညာ မျိုးကို သင်ပေးရ မလဲ ဆိုတာဟာလည်း ခေါင်းရှုပ်အောင် စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စပါ။ သည်လို ရုန်းကန် လှုပ်ရှား နေရတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ သူတို့အရွယ် ရောက်လာရင် အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင် နိုင်စေဖို့ အရင်းအနှီး များကိုလည်း ပေးဝေ နှီးရင်း ဆိုတဲ့ ဖခင်ဝတ္တရား နဲ့အညီ ထုတ်ပေး ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည့်အပြင် ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုတဲ့ ဖခင်ဝတ္တရားကို စိတ်ချမ်းသာစွာ ကျေပွန်နိုင် စေဖို့ ဘယ်လို အိမ်ထောင် ဖက်မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး အိမ်ထောင်ဦးစီး ဘယ်လို လုပ်ရတယ် ဆိုတဲ့ အသိပညာ များကိုလည်းသားများကို ယောက်ျားချင်း သင်ကြားပေးရ ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်လို မြောက်မြား လှစွာသော တာဝန်များကို ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ပါမှ ရတနာသုံးပါး နဲ့တစ်ဂိုဏ်းတည်း ဖြစ်ပြီး အနန္တော အနန္တငါးပါး ဂိုဏ်းဝင်ဖခင် ဖြစ်မှာပါ။
မိမိအာရုံငါးပါးခံစားလို့ ကလေးရလာတိုင်း မိဘအဖြစ်နဲ့ ရတနာသုံးပါးနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းတည်း ဖြစ်ပြီ လို့ မထင်ပါနဲ့၊ ဘုရား ဟောတဲ့ အတိုင်း ဖခင်ဝတ္တရားနဲ့ ကျေပွန်ပါမှ အနန္တောအနန္တ ငါးပါး ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းဝင် ဖြစ်မှာပါ။ ဖခင်ဝတ္တရားနဲ့ ကျေပွန်ပါမှ သီတင်းဝါလ ကျွတ်တိုင်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် အကန်တော့ ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မထိုက်တန်ဘဲ အကန်တော့ခံရင် လက်အုပ်ကျွေး တင်တတ် ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သည်လိုအဖေမျိုး လိုချင်သလားဆိုတာစဉ်းစားပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မယားငယ်ကမွေးတဲ့သား အဖြစ်ခံ ရရင် ကိုယ့်အဖေကိုဘယ်လောက်ကြည်ညိုနိုင်မလဲစဉ်းစားပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မယားငယ်ကမွေးတဲ့ သားအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုကိုခံနိုင်ရဲ့လား၊ သည်လိုအနေအထားကို ကိုယ့်ရင်သွေးကို နေစေသင့်သလား စဉ်းစားပါ။ မယားငယ်ရှိတဲ့ ကိုယ့်အဖေကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ရိုသေနိုင်မလဲ၊ ကိုယ့်သားက ကိုယ့်ကိုမရိုသေရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ၊ ခံစားနိုင်ပါ့ မလားဆိုတာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
ဖခင်ဝတ္တရားကျေပွန်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာ မစဉ်းစား၊ မိမိဇနီး အလှမပြင်နိုင် လောက်အောင် ကလေးအတွက်၊ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပွားလေး အတွက် အလုပ်ရှုပ် နေတာကိုမှ မျက်နှာ မထောက်၊ မလှတော့လို့ဟု အကြောင်းပြကာ မယားငယ်ရရေး အားထုတ်သည်မှ လူမှ ဆန်ပါ လေစ။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ဘာကြောင့်အရေးကြီးသနည်း၊ တစ်သက်လုံး အပြန်အလှန် အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားမှုကို တခဏတာ သာယာမှု စိတ်အလိုကိုလိုက်စားမှု နှင့် လဲနိုင် သည်လား။ မိမိဧ။် ဇနီးသည် လင်ငယ် နေလျှင် မည်သို့ ခံစားရ မည်နည်း၊ ကိုယ်ချင်း စာကြည့် ပါဦး။ မိမိရဲ့ သားသမီး၊ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးများ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်လျှင် မည်သို့ ခံစားရ မည်နည်း။အပူမီးမကူးသလော။ မိမိမယားငယ်ယူလျှင်ရော ၊ မိမိဧ။်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိဘ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုလုံး၊ ပြီးတော့ မိမိဧ။်ဇနီးမယားနှင့် သူဧ။်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုလုံး အပူမီးများ ပွားကြမည်ကို စဉ်းစားမိစေလိုပါသည်။
မိမိအဖြစ်ကိုမိမိသူငယ်ချင်းများသိလျှင်ဟူသောအတွေး အတွက်ပူပင် သောက၊ မိမိဧ။်ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဇနီးသည်ဧ။် ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှသိလျှင် နောက်ဆက်တွဲ ပေါ်လာ နိုင်သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရဦးမည်။ သည်အဖြစ်နှင့် ထိုက်တန်သော မယားငယ် ရှိရိုး ထုံးစံရှိသလား။ အငယ်အနှောင်းဆိုတာ ဟာမိမိရဲ့လက်ရှိစည်းစိမ်၊ ဂုဏ်နှင့်အာဏာကို မက်မောခံစား ချင်လွန်း လို့သာ ဒိုးတူပေါင်ဖက် အတူတကွ ရုန်းကန်ကြိုးစားနေရမယ့် လူပျိုလူလွတ် ကိုမရှာဘဲ (သို့မဟုတ်) မိမိရဲ့အကျင့် စာရိတ္တနှင့် ဘ၀ကြောင့် သည်လို လူပျိုလူလွတ်ကို မရှာနိုင်တော့လို့ လူတကာ အထင်သေးတဲ့ မယားငယ် အဖြစ်ခံကြတာပါ။ ကိုယ့် အတွက် သူတပါး (မယားကြီး) မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျအောင်ခံစားရပါစေ၊ သားကြီးသမီးကြီးများ မည်မျှဂုဏ်သိက္မ္ခာ ကျဆင်း ပါစေ၊ ညှာတာမှုမရှိ ရက်စက်တတ်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိသူတွေသာ မယား ငယ်ခံကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်ကိုယ်ကျရှုံးခဲ့ရင် သည်မယားငယ်ဟာ ကိုယ်နဲ့အတူဆင်းရဲမှုကို မျှဝေ ခံစားမယ်မထင်ပါနဲ့။အဲသည်လိုကြုံခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုထားခဲ့ပြီး နောက်ယောက်ျား ရှာကြမယ့် သူများ ချည့် ဆိုတာ သတိထားပါ။မိမိရင်သွေးများက သီတင်းကျွတ်ချိန်တွင် လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုး ထိုက်သော ရိုသေလေးမြတ် ထိုက်သောဖခင်အဖြစ်နေရာရလျှင်မည်မျှ ကြည်နူးဖွယ်ရာ ကောင်းမည်နည်း။ မိမိရဲ့ဇနီးသည်ဧ။် ယုံကြည် မြတ်နိုး ကိုးစားခြင်း ခံရသည်လောက် ကျေနပ်စရာ ဘာရှိမည်နည်း။ ထိုသို့ကောင်းမြတ်ကျက်သရေရှိသော အခြေအနေကို တန်ဖိုးမရှိသောမိန်းမ တစ်ယောက်အတွက်စွန့်လွှတ်နိုင်လောက်အောင် မစိတ်မွှန်မှုကိုမှ အချစ်လို့သတ် မှတ်လျှင် ထိုသူလောက် ရူးမိုက်သူရှိမည်မဟုတ်ပါချေ။
လူသားလောကကိုကြီးစိုးထားပါသည်ဆိုသောအိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုသော အသင်တို့ ယောက်ျား ဘသား ဆိုသူများဟူသောအိမ်ခေါင်မိုးမှစပြီးမိုးယိုခဲ့သော် လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်လုံး တည်းဟူသော အိမ်တစ်အိမ် လုံး မကောင်းမှုမိုးရွှဲစိုနေပါလိမ့်မည်။စိတ်ထားနူးညံ့ပျော့ပြောင်းကာ စိတ်ခိုင်မာမှုယောက်ျားများထက် နည်းပါးသည် ဆိုသောအိမ်ရှင်မများကရော အိမ်ထောင်ဦးစီးဧ။် မကောင်းမှုကြောင့်အပူမီးမွှေခံရပါက သည်အိမ်ထောင်ကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းနိုင် ပါမည် နည်း။သည်လိုဆိုလျှင်ရင်သွေးငယ်များဖြစ်သောအနာဂတ်ဧ။် ခေါင်းဆောင်လောင်း ကလေးငယ် များ ကိုးကွယ်ရာ ရှိပါမည်လော။ သည်လိုကလေးငယ်များကို မည်သူ က မည်သည့်လောက ရေးရာများကို သင်ပေးကာ သည်ကလေးများက မည်သည့်အရာများကို ယင်းတို့ဧ။် မိခင်ဖခင် တို့ထံမှ သင်ယူပါမည် နည်း။ သည်ကလေးများကြီးပြင်းလာပါက သည်လိုကလေးများစုစည်း ထားသောအနာဂတ်နိုင်ငံတော်သည်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သည်အိမ်ထောင်နှင့်တကွပတ်သက်ရာ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုလုံးတွင်ရော မည်သို့ဂယက်ရိုက်ခတ်ပါမည်နည်း။ အိမ်ထောင် ဦးစီးဖြစ်သူ တစ်ဦးဧ။် စိတ်အလိုလိုက်မှုသည် မည်မျှအထိ တာသွားသည်ကို ခန့်မှန်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။
မဟာယောက်ျားကြီးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာကြွားဝါနေမည့်အစား ထိုအမှုများကို ရှောင်ကြဉ် ကာ တကယ်လေးစားထိုက်သော မဟာယောက်ျားကောင်းများ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားစေချင်ပါသည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ နောက်မိန်းမအငယ်အနှောင်းများကို မှိုလိုပေါက်နေအောင်ထားရင်း မွေးစားသမီး အဖြစ် ကြေငြာထားသောမိန်းကလေးများကိုမွေးထားပြီးခိုင်းစားခြင်း၊ မြေးမလေးဟု ကြေညာကာ အပျိုကလေးဧ။် အရသာကိုမြည်းစမ်းခြင်း စသည်ဖြင့် မိန်းကလေးများကို လှည့်လည် ဖျက်ဆီး နေသူများသည် ၀ဋ်လည်သော အခါ သားသမီးအစစ်၊ မြေးအစစ် ချီရတော့မည် မဟုတ်ပေ။ ငရဲမှာအပ၊ ၀ဋ်မှာအမြဲပါတည်း။ သူတပါးဧ။် မိခင်လောင်းကို ဖျက်ဆီးလျှင် မိမိဧ။်မိခင်လည်း သည်လို ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သည်လိုမိန်းမမျိုးရဲ့သား မိမိဖြစ်ခဲ့ပါလျှင်ဆိုသော စိတ်မျိုး ကိုယ်ချင်းစာ သင့်လှပါသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ မြာစွံသည်ဆိုသည်ကိုသဘော ကျမည့်အစား လူ့လောက အလယ်တွင် လူသားများအချင်းချင်းက မိမိဧ။်ဂုဏ်ကျေးဇူးကို တန်ဖိုးထား လေးစားရသော တန်ဖိုးအစစ်ရှိသောယောက်ျား၊ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်လိပ်ပြာသန့်နေရသော ယောက်ျားအဖြစ် ဂုဏ်ယူ သဘောကျ နေသင့်ပါသည်။
အထက်ပါအကြောင်းအချက်များမှာ မည်သူ့ကိုမျှ ရည်ရွယ်ရေးသား သည်မဟုတ်ဘဲ ယောက်ျား သား များအား မိမိဧ။်ဆွေမျိုးသားချင်းများသဖွယ် သဘောထားကာ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ဟူသော စကားနှင့်အညီ မိမိဧ။်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပျက်နေကြသည်ကို တွေ့မြင် မိသည့် အတွက် သတိတရား လက်ကိုင်ထားနိုင်စေရန် မိန်းကလေးတစ်ဦးဧ။်အမြင်ဖြင့် တင်ပြ လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှင့်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 9:34 PM
အခုလို ဝေမျှပေးထားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ထပ်ဖတ်ပါဦးမယ် ခင်ဗျာ ။
အခုခေတ် လူငယ်များဟာ မြာပွေခြင်းကို ယောက်ျားကောင်းလို့ထင် နေကြပါတယ်။
မိမိ ချစ်သူ၊ ဇနီး အပေါ်မှာ သစ္စာရှိရတာကို
တုံးတယ်၊ လူရာမ၀င်ဘူးလို့ ထင်နေကြပါတယ်။
ရိုးသားရတာကို ရှက်နေကြပြီး၊ လူကြားမှာ
စေတနာထား ရေးသားသွားတဲ့ အမရဲ့
လူမှုဘ၀ကောင်းဖို့ စနစ်တကျ၊ အချက်အလက်စုံစုံ
ရေးသားထားတဲ့ အရေးအသားကလဲ စွဲဆောင်မှုရှိလှပါတယ်ရှင်။
မိန်းမသားတွေ စောင့်ထိန်းရမဲ့ တာဝန်တွေလဲ ရေးဦး။
တချို့ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အတူ
အရက်သောက်နိုင်မှ၊ ညနက်ထိ လည်ပတ်နိုင်မှ ၊ ရည်းစားထည်လဲ ထားတာမှ၊ ယောက်ျားကို နိုင် မှ တန်းတူအခွင့်အရေးလို့ ထင်နေတာတွေကို အမှန်မြင်နိုင် ပြင်နိုင်အောင်လေ။
တကယ့်အခွင့်အရေးနဲ့ တူညီတဲ့ တန်းတူနေရာရနိုင်ဖို့
ဒီပို့စ်လေးကို ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ။ ကျွန်မလည်း အဲဒီလို ယောက်ျားဘသားတွေအကြောင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တွေ့နေကြားနေရတာတွေကို ရေးချင်နေတာ။ ရေးရင်လည်း အစ်မလို ထိထိမိမိ ရေးတတ်မှာ မဟုတ်တော့ အစ်မရေးပေးတာကိုပဲ လေးလေးစားစား ဖတ်သွားပါတယ်။
"" တချို့ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အတူ အရက်သောက်နိုင်မှ၊ ညနက်ထိ လည်ပတ်နိုင်မှ ၊ ရည်းစားထည်လဲ ထားတာမှ၊ ယောက်ျားကို နိုင် မှ တန်းတူအခွင့်အရေးလို့ ""
မြန်မာပြည် အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သူတွေကို ထားလိုက်ပါ။ အနောက်နိုင်ငံ မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေ၊ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကို ဥပမာပေးပါမယ်။
၀မ်းမှာ အချင့် ၊ လူမှာ အကျင့် ရှိပါတယ်၊
ဘီယာဟာ (အရက်သောက်တယ် ပဲ ထားပါတော့) အရက်လောက်တော့ မမူးပါဘူး။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သောက်လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ၁၀ ဘူး လောက်တော့ အသာလေးပါ။ ဘီယာသောက်ရင် သေးပေါက် ဆိုတဲ့ စကားဟာ အလကား ထွက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီလို သောက်နိုင်တာကို တန်းတူ အခွင့်အရေးယူတယ်လို့ပြောနိုင်ပါ့မလား။
Night Club တက်တယ် ၊ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် လည်ပတ်တယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ ၊ကာမပိုင်မရှိတဲ့ မိန်းမသားတစ်ဦးဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ကာမပ်ိုင်မရှိတဲ့ ယောကျာ်းသားတစ်ဦး နဲ့အတူတူ လည်ပတ်တာကို တန်းတူအခွင့်အရေးယူတယ်လို့ ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ လူ့ အခွင့်အရေး အကြောင်းတွေ ရေးနေတဲ့သူ ကိုယ်တိုင်ပဲ အသိဆုံးပါ။
ကာမပိုင်ဆိုတာကတော့ ဘုရားဟောကိုပဲ ကြည့်ပါ။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ၁၈ နှစ်ပြည့်ရင် ၉၉ ရာနှုန်းဟာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွား ၊ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်း ရပါတယ်။ အုပ်ထိန်းသူ ကာမပိုင် ဆိုတာ ဘယ်နားမှာပါလ်ိမ့် ။ ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပဲ့ကိုင်ဖြစ်ပြီပေါ့။ အဲဒီလို ကာမပိုင် မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ညဉ့်နက်သန်းခေါင် Club သွားတာ အခွင့်အရေးတန်းတူယူတယ်ထင်မလား ။ မကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားထဲကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ မရမ်းလိုက်ပါနဲ့ ။
Business လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီး (လူလွတ်) တစ်ယောက်ဟာ လုပ်ငန်းအတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာမှာ သောက်ရ စားရတဲ့ အလေ့အထ ကို ငြင်းနိုင်စွမ်းရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငြင်းရင်တော့ စီးပွားရေး လောကမှာ So Rude ဆိုတဲ့ အမည်ပေါက်သွားမှာပေါ့။
Choice & Selection ကို နားလည်ထားရင် မိန်းကလေးတွေ ရည်းစားများတာ ဟာ အပြစ်မဟုတ်ဘူး ။ ဘယ်မိန်းကလေးကမှတော့ ရည်းစား ၁၀၀၀ မထားချင်ပါဘူး။ ထားတုန်းကတော့ အတည်ထားတာပဲ။ ကောင်လေး လုပ်တဲ့သူ က အရည်အချင်းမရှိတာနဲ့ ။ စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ ။ ငွေကြေး ဓန ဥစ္စာတွေ ဆိုတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတွေကြောင့် ၁ ယောက်ကနေ ၂ ယောက် ၊ ၃ ယောက် ဖြစ်ရတာ။
တူ၂ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နေပြီး ထမင်းရည် အတူတူမှုတ်သောက်မယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးက ဟိုးအဝေးကြီးမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မျက်စိမှိတ် ယူနိုင်ပါ့မလား။
Virginity ကိုပြောချင်သေးတယ် ဆိုရင် ဘုရားဟောမှာတော့ အိမ်ထောင်ပြုရင် မိန်းမသားဟာ Virgin ဖြစ်ရမယ်လို့ မပါဘူး။ မယားဝတ်တရား ၅ ပါးနဲ့ကျင့်ကြံတတ်ရင် မိန်းမကောင်းလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ပြိးတော့လည်း မိခင်နှင့်တူသော မိန်းမ၊ ကျွန်နှင့်တူသော မိန်းမ ၊ မိတ်ဆွေ ၊သခင် အစရှိသဖြင့် မိန်းမအပြား အမျိုးမျိုးတွေထဲက ကောင်းမွန်တဲ့ မိန်းမမျိုး ဖြစ်အောင် စံနမူနာ ပြနိုင်ရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေပါတယ်။
ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူတွေကလည်း နားလည်မှု ပေးတတ်လာပါပြီ။ သူတို့ လည်း Beachelor ဟုတ်ပါ့မလား။
ယောက်ျားကို နိုင်မှ ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ယူလိုက်ပြီး မှ တွေ့ မြင်လာရတဲ့ ယောက်ျားရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေ ဖာထေးပေးတာကို အပြစ်ဆိုရမလား။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း အိမ်ထောင်ပဲ အပျက်ခံမလား။ တစ်လင်ကွာ ဘွဲ့ ကိုပဲ ခံယူမလား ။
အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊ သိမ်းထုပ်သေချာ ဆိုတဲ့ မယားဝတ္တရားတွေ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်တာကို တန်းတူအခွင့်အရေးလို့ ထင်မလား။
၄၀ ကျော်ဆိုတဲ့ ဘ၀အတွေ့ အကြုံနဲ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ နောက်ခံ ဘ၀အကြောင်း တွေနဲ့ယှဉ်မပြောသာပေမဲ့ ရောမရောက်ရင် ရောမ လို ကျင့် ရမယ်၊ ကာလံဒေသံ၊ ဆိုတာကလည်း ဆိုင်ပါသေးတယ်။ Modern မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဘီယာသောက်ပါတယ်။ ကလပ်တက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က စိတ်ဓါတ် အတွေးအခေါ်တွေ ဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ ပဲ လိုက်လျောညီထွေပြီး အနောက်နိုင်ငံနဲ့ ပြည်ပတွေ မှာ နေထိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီက ဓလေ့ထုံးတမ်း တွေနဲ့ Adjust လုပ်နေထိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းကားခြင်း ...ကင်းဝေးကြပါစေ
ဘယ့်နှာဖြစ်လို့ အဲလောက်တောင် ပေါက်ကွဲနေရပါသလဲ။
အနောနီးမတ်လို့ ခေါ်တဲ့ မိန်းခလေး
မင်းက မြန်မာယဉ်ကျေးမှု့ ကို လိုက်နာတဲ့ ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ လာပြီး အရှက်မဲ့တဲ့ စကားတွေ ရေးနေတာ စိတ်ပျက်စရာဘဲ။ အေးလေ ဗုဒွဘာသာဝင်တွေ အလေးမြတ်ထားတဲ့ တန်ဆောင်တိုင် ကိုတောင် ချီးသေးနဲ့ နှိုင်းပြီး ဟားနေတာ မင်းအဆင့်တန်းကို မိဘဆုံးမခံတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့ ရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အားလုံး က နားလည်ပြီးသား။
ဒီမယ် မိန်းခလေး မင်းနဲ့ဒီဆိုဒ်နဲ့မသင့်လျော်ဘူး မင်းသွားရမှာက saucy web site, dating ဆိုဒ်တွေ ဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး လို့ စာချီးမှာ ရေးထားတာ တွေ့ ပါသလား။ ??
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရှက်မဲ့တဲ့စကားတွေ ရေးထားတယ်လို့သုံးသပ်မိရင်လည်း ဘာတွေများ အရှက်မဲ့တဲ့ စကား ရေးမိသလဲဆိုတာ ပြန်ထောက်ပြပါအုံး။ အကိုးအကားနဲ့ တစ်ကွ ရှင်းပြပါလား ။ လေ့လာကြည့်တာပေါ့။
မင်္ဂလာဗျူဟာ တို့ ဘာတို့ ကော ကြားဖူးရဲ့ လား ။ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ကို ပထမတွဲကော ကုန်အောင် ဖတ်ဖူးရဲ့ လား ။ ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့ စဉ်ကော ပြုဖူးပါသလား ??
သေးပေါက်ထားတဲ့ည လို့ ရေးတာကို တန်ဆောင်တိုင်ကို နှိုင်းတယ်ထင်ရင်လည်း ကိုယ်ထင်ကုတင် ရွှေနန်းပေါ့နော..
အဲဒီညမှာကော Burmar 1988 တစ်ယောက် မသိုးသင်္ကန်း ကိုထားလိုက်ပါအုံး ။တော်ကြာ ပြည်ပရောက်နေလို့ သင်္ကန်းမရှိဘူ့း ပြောနေမှာစိုးလို့ ပါ။ ၁ နာရီလောက် ဘုရားစင်ရှေ့ မှာ ထိုင်ပြီး ရွတ်ဖတ်တာတွေ လုပ်လိုက်မိရဲ့ လား ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာသာရေးကို အရမ်းလေးစားတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ...
လူတစ်ဖက်သားကို ဟိုနေရာကိုသွား ၊ ဒီနေရာကို သွား အာဏာပြရအောင် Burmar 1988 က ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ် ပိုင်ရှင်လား ။ အာဏာရှင်လား ။
saucy web site, dating ဆိုဒ်တွေ ဆိုလို့ပြန်တောင်မေးလိုက်ချင်သေးတယ် Burmar 1988 ရေ။ ငယ်စဉ် လူပျိုဘ၀မှာ ကိုယ်တိုင်ကော လွတ်ကင်းဖူးရဲ့လား ။
တော်ပါပြီ ဒီလောက်ဆိုရင်။ နို့ မို့ ဆို ဟိုဆိုက်ထဲမှာ ရေးသလို အန်တီက တစ်နေကုန် အားနေတာ ။ ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ ဖောက်ခွဲလိုက်တာ လို့ရေးမိနေအုံးမယ်..
PS.ဘာတွေများ အရှက်မဲ့တဲ့ စကား ရေးမိသလဲဆိုတာ ပြန်ထောက်ပြပါအုံး။ အကိုးအကားနဲ့ တစ်ကွ ရှင်းပြပါလား ။ လေ့လာကြည့်တာပေါ့။ Welcome ပါ..
အရက်သောက်တယ် ညနက်ထိလည်တယ်ဆိုတာတွေ အားလုံးဟာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲ ..
ဒါဟာ ယောက်ျားတွေကို တန်းညှိုတဲ့အခွင့်အရေး မဟုတ်ဘူး လို့ ဆိုလိုထားတာပါ။
အဲဒါတွေမှာ အကုန်လိုက်လုပ်နိုင်၊ ကျော်လွန်နိုင်မှ တန်းတူအခွင့်အရေး မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ချင်သူက သူ့ဖာသာလုပ်ပါစေ။ ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းအ၀န်းက သူ့ဖာသာ သူ တန်ဖိုးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျမ ဆိုလိုတဲ့ တန်းတူ ဆိုတာ အလုပ်တွေမှာပါ။ ကာယအား ဥာဏအားတွေအရည်အချင်း အရည်အသွေးတန်းတူထက်မညံ့အောင် ကြိုးစားအားထုတ်စေချင်တာ... မိန်းမမို့ ဆိုတဲ့ စိတ်မထားပဲ အခွင့်အရေးမယူပဲ လူလူချင်း သူတွေးသလို တွေးနိုင်အောင် သူဆင်ခြင်နိုင်သလို ဆင်ခြင်နိုင်အောင် အသိပညာ ဗဟုသုတတွေကို လေ့လာလိုက်စားဖို့ ..ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့....
တကယ့်ယှဉ်ရမဲ့ တရားကို သိစေချင်လို့ ပြောပြတာပါ...
ဒါမျိုးစကားဆိုတာလဲ ခံယူတဲ့ သူရဲ့ အခံစိတ်နဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်...
ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ င့ါစကားနွားရတော့ မပြောတတ်ပါဘူး.. နာမည်ရင်းနဲ့ပဲ ဆွေးနွေးမယ် ...
ရဲဝံ့ရင် ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ အာမခံတာဝန်ယူနိုင်အောင်
ဘယ်သူက ဘယ်စကားကို ဘယ်လိုအချိန်မှာ ပြောတယ်ဆိုတာ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်သွားပါလိမ့်မယ်...
"တချို့ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အတူ
အရက်သောက်နိုင်မှ၊ ညနက်ထိ လည်ပတ်နိုင်မှ ၊ ရည်းစားထည်လဲ ထားတာမှ၊ ယောက်ျားကို နိုင် မှ တန်းတူအခွင့်အရေး"
အဲဒါကို ကိုယ်ကထောက်ပြပြီး ပြောတာလေ..
သောက်နိုင်တာ..လည်ပတ်နိုင်တာ..ရည်းစားထည်လဲ ထား တာ တန်းတူ လို့ ထင်တဲ့သူအတွက်
ရှင်းပြထားတာ..သေချာဖတ်ပါအုံး.. လွတ်လပ်တဲ့ ကာမပိုင် မရှိ အမျိုးသမီး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားတယ်လေ..
ရှင်းပြတဲ့အခါမှာလည်း ကျွဲပါးစာင်းတီး အချီးအနှီးလို မျိုးမဖြစ်ရအောင်..နွားကို ပလာတာကျွေးသလိုမျိုး မဖြစ်ရအောင်
အကိုးအကားနဲ့ တစ်ကွ သေချာရှင်းပြထားတယ်...လိုအပ်သလို အထင်အမြင်အယူအဆတွေကို Adjust လုပ်ရပါမယ်လို့ ရေးထားတယ်..
အမြင်မတူရင် ကွန် မန့် မှာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ ရတယ်လို့ လဲ ပြောထားပြီးသား..
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးထားတယ်...ဘယ်သားသမီး မှ စော်ကားထားတာ မရေးဘူး..
အဲဒါကိုမှ အရှက်မရှိရေးနေတယ်ထင်ရင်လည်း ဒါလေးလက်ဆောင် ဖတ်လိုက်ပါ.
ကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက်ချသလို ချပေးထားတဲ့ သြ၀ါဒ စရိယ တွေနဲ့အရမ်း ကိုပဲ အရှက်သိက္ခာ ကာယအိနြေ္ဒ
ကြီးတယ် ဆိုရင်လည်း ဂျင်းဘောင်းဘီ တွေ ၀တ်မနေနဲ့ တော့ . ခြေဖျားထိ ဖုံးတဲ့ ထိုင်မသိမ်းတွေနဲ့ 
ဘတ်စ်ကား တိုးစီးကြတော့ ။ မြို့ လယ်ခေါင် ပန်းခြံတွေမှာ စုံတွဲ ခုတ်မနေနဲ့ တော့ ..ကာယအိနြေ္ဒ လုံခြုံတဲ့ လူမမြင်သူမြင်တဲ့ တိုက်ခန်းထဲမှာပဲ တွေ့ ကြတော့.
အဲ..ဆွေးနွေးဖို့ အတွက် မှတ်ပုံတင်ပြရအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆောရီးပဲ..
ဝေဖန်သူများလာလို့ " အန်တီက ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ ဖောက်ခွဲ လိုက်တာလေ..
တစ်နေကုန် အားနေတာနဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်ပြီး ရီနေတာ" ဆိုပြီး မရေးစေရဘူး စိတ်ချ..
မရဲဝံ့လို့ ၊ အာမခံ တာဝန်မယူရဲ လို့ တော့ မထင်ပါနဲ့ ...ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းတင်မဟုတ်ဘူး..ခင်မင်းဇော် ရေးသားနေတဲ့
အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ချင်သေးသပ ဆိုရင်လည်း ဖြစ်တယ် .
မိန်းမတွေ တန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာ ပညာ၊စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ရာထူးမှာ လူတဦးအနေနဲ့အောင်မြင် တာကို ပြောဆိုချင်တာ မင်းလို အကျင့်ပျက်တဲ့ အကျင့်တွေ လာပြီး ဖေါ်ပြနေတာ အရှက်မရှိဘူး။ အသက်၄၀ အရွယ်ကို မွေးဖွားတဲ့ ကာလအပိုင်းခြားမှာ မြန်မာတွေဟာ အလွန် ယဉ်ကျေးမှု့ ကို ထိန်းတဲ့ generation ဘဲ။ အဲဒီ အသက်၄၀ရှိတဲ့ မင်းလိုလူက ဒီလို အကျင့်ပျက်ရတာ မှန်ကြောင်း လူ့ အခွင့်ရေးနဲ့ လာအော်နေတာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဘဲ။ မင်းကိုမွေးတဲ့ မင်းမိဘက မင်းအကျင့်ပျက်အောင် သင်ခဲ့ပုံရတယ်။ မင်းက မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေ လည်း မင်းထက် ပိုအကျင့်ပျက်မဲ့ ပုံဘဲ။ ငါတို့ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှု့ ကိုထိန်းတဲ့ ဒီဘလော့မှာ မင်းလို လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့ စရိုက်ကို ဘယ်သူမှ အကောင်းမမြင်ဘူး။ မင်းလို အကျင့်ပျက်တဲ့ သူတွေ သာ ထောက်ခံမယ်။ မင်းအတွက် ဒီဘလော့က မအပ်စပ်ဘူး။ မဟုတ်တဲ့စာတွေရေးပြီး ငါတို့ ကို လာစိတ်အနှောက်ယှက် ပေးတယ်။ မကောင်းမှု့ ကို သာ မွှေ့ ပျော်ရုံသာ မကဘူး မကောင်းမှု့ ကို တိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့ အကျင့်ပျက်တဲ့ မိန်းမရေ
အမ ရေးထားတာတွေကို တော်တော် ကြိုက်ပါတယ် ..
ဒီစာလေးကတော့ ယောက်ျားတွေ အတွက်တော့ မပြောတတ်ဘူး.. ညီမအတွက်တော့ အတော် ဗဟုသုတ ရပါတယ်..
Adjust လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အရင်ပြောမယ်လူကလေး..သေချာဖတ် နော်....
သက်ရှိလူသားကို အသာထားလိုက်အုံး..ကိုယ်တို့ သုံးနေတဲ့ နာရီနဲ့ စလိုက်ရအောင်.
လူကလေးကိုပဲ စံနမူနာ ထားပြီး ပြောပြသွားမယ်နော်..
လူကလေး ပြည်ပကို “တိုင်းပြည်အတွက် ကျွန်တော် ကောင်းစားအောင် လုပ်မယ် “ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကို နဖူးပေါ်
အာရှအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် ၊ ဥရောပဖြစ်ဖြစ် ၊ အမေရိကားဖြစ်ဖြစ် ကြုံရာပေါ့ကွယ် ..ထွက်လာခဲတယ်ပေါ့.. လူကလေး လက်မြှောက်မဲ့ ၊
ခိုလှုံရမဲ့ တိုင်းပြည်ကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် လူကလေး ဘာလုပ်သလဲ ..လ၀က နဲ့ တွေ့ တယ်လို့ တော့ မဖြေနဲ့ နော်..
လူကလေး နာရီကို အဲဒီတိုင်းပြည် ၊ နိုင်ငံ ရဲ့အချိန်အတိုင်း Adjust လုပ်လိုက်ရတယ် မဟုတ်လား... မြန်မာပြည်မှာ တစ်သက်လုံး သုံးလာခဲ့တဲ့
စံတော်ချိန်ကို အဲဒီနိုင်ငံက မသုံးဘူးကွဲ့ လူကလေးရဲ့ ...မြန်မာပြည်နဲ့ နီးရင် နီးသလို ၊ ဝေးရင် ဝေးသလို Adjust ကို နည်းနည်း ၊
များများ ညှိပေးရတာပေါ့ကွယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ Culture ဟာလည်း Directly relative ကျတယ်ကွဲ့ ...
အဲဒီလို လူလေး ရောက်သွားပြီးတာနဲ့လူလေး သိပ်ပြီး နှစ်ခြိုက်လှပါပြီ ၊ ကြိုက်လှပါပြီ ဆိုတဲ့ အတောင်၂၀ ၀တ်ကြီးကို လူလေး ချွတ်ရတော့မယ်..
လူလေးစိတ်ထဲကကို အလိုလိုနေရင်း ချွတ်ချင်နေတာပေါ့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား..ရင်လည်း ခုန်နေမှာပေါ့နော်..ဟင်းဟင်း..
ငါ့နှယ် မကြီးမငယ်နဲ့ တစ်သက်လုံး ၀တ်လာခဲ့တဲ့ ဒီအတောင် ၂၀ ၀တ်ကြီး ကို ဒီအသက်အရွယ်ကျမှ ချွတ်ရမယ်ဆိုတော့
မင်္ဂလာဦး ညလို ခံစားနေရမယ်ထင်ပါရဲ့..လူလေးရဲ့ Traditional အရ ၀တ်လာခဲ့တဲ့ အတောင်၂၀ ၀တ်ကြီးကို ၀တ်ပြီး မြို့ လယ်ကောင်မှာ
လျှောက်ရင်တော့ လူတွေက အထူးအဆန်းအကောင် တစ်ကောင် အနေနဲ့ ၀ိုင်းကြည့် မှာပေါ့..မုတ်သုံရာသီ ..ပူနွေးတဲ့ ရာသီ တွေမှာ တော့
သိပ်ပြီး အပြစ်မရှိပါဘူး..၀တ်ရဲရင်ပေါ့လေ..အဲ..ဒါပေမဲ့ ..ဥရောပလို ..ကနေဒါလို ..ရုရားလိုမျိုး နိုင်ငံတွေမှာ တော့ ဒါ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ကိုထိန်းတဲ့
အနေနဲ့သံရုံးတွေ ရှေ့ မှာ လက်သွားမြှောက်ရင်တော့ အဲဒီလို ၀တ်ပြီးသွားမိရင်တော့ ဟဲဟဲ ..ဘုန်းကညာ တစ်ပါး..လုံးရာက ခဲသွားလိမ့်မယ် လူလေး...
အဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့ လူကလေးရယ်...အမျိုးသမီးတွေလည်း သူတို့ အ၀တ်အစား အတွက် Adjust လုပ်ရမှာပေါ့... ရှင်းပါတယ်နော်..
လူလေး အဲဒီ နိုင်ငံရောက်သွားပြီး စားချင် သောက်ချင် လာပြီ ဆိုပါစို့ . မစားဘဲနဲ့ တော့ မနေပါဘူးနော..
မနက်မနက် ဟောဒီက ပဲပြုတ် တော်ရေ့လို့ တော့ အဲဒီမှာ လာရောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး...ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရတယ်လူကလေး..
မြန်မာပြည်မှာလို မိဆုံးမ ဖဆုံးမ မိဘတွေက သားလေး ၊ သမီးလေး မနက် လင်းနေပြီ ၊ နေဖင်ထိုးအောင် မအိပ်နဲ့ တော့..မနက်စာ ထစားတော့
ဆိုပြီး အော်ပြောမဲ့ သူမရှိဘူး..မိဆုံးမ ဖဆုံးမ သားသမီးတွေကလည်း အလိုက်သိတတ်လိုက်တာ လွန်ပါရော...မနက်စောစော ထပြီး ဘုရား သောက်တော်ရေ
လေး ဘာလေး လဲပြုပေး...သြကာသ ကို အကျယ်ကြီးအော် ဆို....မိဆုံးမ ဖဆုံးမ မိဘတွေအတွက် မနက်စာ လေး ထချက်ဖို့ ဝေလာဝေးရောပေါ့
လူကလေးရယ်..မနက်စောစော မိဆုံးမ ဖဆုံးမ မိဘတွေရဲ့ အော်နှိုးသံတွေနဲ့ ကျက်သရေ ရှိနေကြတာကလား ..
အဲဒီတော့ လူကလေး မနက်ဖက် ကို မုန့် ဟင်းခါး ၊ ထမင်းကြမ်းနဲ့ငပိစားချင်ပါပြီတဲ့ . အဲဒီနိုင်ငံမှာ ရပါ့မလား ..သားကတော့ အကြော်နဲ့ တစ်ပွဲ လို့ အိပ်ရာကနေ
ယောင်ယောင်ပြီး ထအော်နေလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့ ...
ရေသောက်တယ် ဆိုပါစို့ ကွယ်..လူကလေးရယ်.. ဘီယာ နဲ့ ရေ ဟာ အနောက်နိုင်ငံမှာ ဈေးက သိပ်မကွာဘူးကွဲ့ ..မြန်မာပြည်လို ဈေးမကြီးဘူး.. နောက်ပြီးတော့ ဘီယာဟာ သူ တို့ ရဲ့ Traditional
အလေ့အထ..လူလေးဟာ လူသားတစ်ဦး ဆိုရင် အသစ်အဆန်းတွေ မြည်းခြင်မှာပေါ့နော်... အဲဒီတော့ကာ..မြန်မာပြည်မှာ ၀ယ်မသောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘီယာ၊ ထားပါလေ...သောက်ခွင့်မပြုလို့ 
မသောက်ခဲ့ရတဲ့ ဘီယာ လို့ပြောကြပါစို့ ..မိဆုံးမ ဖဆုံးမ မိဘတွေက တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ မိဆုံးမ ဖဆုံးမ သားသမီးတွေက လိုက်နာရမှာပေါ့နော... ဈေးမကွာတဲ့ ရေနဲ့ ဘီယာ...အသစ်အဆန်း မြည်းချင်တဲ့ လူ့ သဘာဝ
...ဘီယာကို ပဲ မြည်းမှာပေါ့.. ဘီယာသောက်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ...ဘာမှ မဖြစ်ဘူး...ရေသောက်သလိုပဲ... လူလေးနိုင်ငံက လူတွေလည်း သောက်တယ်..မိန်းမတွေလည်း သောက်တယ်..
အထူးအဆန်းမဖြစ်ဘူး..မြန်မာပြည်မှာလည်း မိဆုံးမ ဖဆုံးမ သားသမီးတွေ လည်း မသောက်ပါဘူး ကွယ်ရာက လွဲလို့ ပေါ့လေ...
အဲဒီနည်းတူစွာပဲ တစ်ခြား လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွေ ၊ စီးပွားရေးတွေ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တွေမှာပါ (အဲဒီအကြောင်းတွေ ဆက်ပြောနေရင် လူလေးပဲ ကိုယ်နေတဲ့ နိုင်ငံကို လေ့လာကြည့်လိုက်)
လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို Adjust လုပ်ယူရတယ်ကွဲ့ ..ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား လူကလေး....
အဲဒီမှာတင်ပဲ ...Equal Opportunity တွေ ၊ Privacy ကိစ္စတွေ တွေ့ လာရမှာပဲ ..အဲဒီတော့မှ အော်..ငါ မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းက ဒါတွေ မသိခဲ့ဘူး... မြန်မာပြည်တုန်းက
စပ်စပ်စုစု လုပ်တာတွေ ဟာ ဒီမှာ Privacy ဆိုတာတွေ ၊ ဟိုအခွင့် အရေး ၊ ဒီအခွင့် အရေး ဆိုတာလေးတွေ သိလာရတယ်မဟုတ်လား.. သံရုံးရှေ့လက်မြှောက်ရတာ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့ လူကလေးရယ်..
အဲ...Socialisim တွေ ၊ Communisim တွေ မဖတ် မသိပဲ ၊ သူများ ဒီမို ကိုယ် ဒီမို လုပ် ၊သူများရေးတိုင်း ကိုယ်လိုက်ရေးတဲ့ ဘလော့ကာ ပေါက်စနလေးတွေ လို တော့ မလုပ်နဲ့ ပေါ့ကွယ်..
(တိုင်းပြည် တိုးတက် စေချင်တဲ့ ၊ ကောင်းစားစေချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပြီးသား)
တော်ကြာ အမေစု မိုက်ကိုင်တဲ့ပုံကို " ဒါ မြန်မာပြည်က ခေတ်ဟောင်း အဆိုတော်" ဆိုပြီး အင်တာဗျူး မှာ ဖြေမိနေအုံးမယ်...
NLD ဆိုတာ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ သံရုံးရှေ့ မှာ လက်မြှောက်ချင်သေးတယ်...
လူကလေး သိပ်ပြောချင်နေတဲ့ အသက် ၄၀ ကျော် Generation ဆိုတာကြီးကို မေ့ထားလိုက် ... ဒီနေရာမှာ Generation ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ မှားနေတယ်..
၄၀ ကျော် အရွယ် မိန်းမတွေ ၊ ယောကျာ်းတွေ ဘာလုပ်လဲ ..မြန်မာပြည်မှာ....ဆိုလိုချင်တာက ဘုရားသွားကျောင်းတက်တယ် လို့ ပြောချင်တယ်ထင်ပါရဲ့ ...
အဲဒါဟာ ယဉ်ကျေးမှု ကို ထိန်းတာမဟုတ်ဘူး လူကလေးရဲ့ ...ဘာသာရေး လုပ်တယ် ခေါ်တယ်..
ဘာသာရေး နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်း တွေ မရောချင်စမ်းပါနဲ့ လူကလေးရယ်...
လူလေး အကျင့်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကိုယ့်ကို အရင်ပြော .။ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်သလဲပေါ့နော်..
အဲဒါကို ပြောပြီးရင် ကိုယ်ပြောပြမယ်...မပြောလည်း နောက်နေ့ တွေ မှာ ကိုယ်ပဲ ပြောပြပါ့ မယ်...
ဒီနေ့ တော့ စာရှည်သွားပြီ..နောက်နေ့ တွေ မှ လူလေးပြောချင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ ၄၀ ကျော်တွေ အကြောင်း ပြောကြတာပေါ့..
ဒီ အပိုင်းကတော့ ခင်မင်းဇော် ဆိုသူအတွက်ပါ..
ခင်မင်းဇော် ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အပိုင်းနဲ့ ကိုယ် ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အပိုင်းက ပြဒါး တစ်လမ်း သံတစ်လမ်း ဖြစ်နေတယ်..
ခင်မင်းဇော် က.."ကျမ ဆိုလိုတဲ့ တန်းတူ ဆိုတာ အလုပ်တွေမှာပါ။ ကာယအား ဥာဏအားတွေအရည်အချင်း အရည်အသွေး
တန်းတူထက်မညံ့အောင် ကြိုးစားအားထုတ်စေချင်တာ." ဆိုတာနဲ့ 
" တချို့ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အတူ အရက်သောက်နိုင်မှ၊ ညနက်ထိ လည်ပတ်နိုင်မှ ၊ ရည်းစားထည်လဲ ထားတာမှ၊ ယောက်ျားကို နိုင် မှ
တန်းတူအခွင့်အရေးလို့ ထင်နေတာတွေ " ဆိုတာနဲ့ ဟိုတစ်ယောက် ဘာမသိ ညာမသိ ကွမ်းစားပြီး ၀င်ဆော်နေတဲ့ " ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်း" တာတွေ
နဲ့ကီးမကိုက်ဘူး...အဲဒီတော့ ခင်မင်းဇော် ထင်တဲ့ အပိုင်း ခင်မင်းဇော် မှန်တယ်...
ကိုယ်ယူဆတဲ့ အပိုင်းလည်း မမှားဘူး .. မှားတယ်ထင်လည်း ၀င်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်... ဒါပါပဲ ..
အန်တီ အနော်နီးမတ်စ် ရေ
ဘုရားဘုရား... ဘယ်လောက်တောင် မှားနေတဲ့အတွေးအခေါ်တွေလဲ..
ဒီဘက်ခေတ်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲတာနဲ့အမျှ တွေးအမြင်အယူအဆပြောင်းလဲလာပါတယ်
ပြောင်းလဲမှူတွေမှာ လက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးရမှာပါပဲ..အန်တီရေ.. လူငယ်ဖြစ်တဲ့ကျမကတော့ ခေတ်မှီတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ခေတ်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ခွဲခြားနားလည်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..
စိတ်မကောင်းပါဘူး..နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေထဲမှာလဲ လမ်းလွဲရောက်နေတဲ့ သူတွေပါလာဦးမှာပါပဲ..ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့သာဆိုင်တဲ့အပြုအမှူအတွက်တော့ ဘာမှဝေဖန်စရာမရှိပါဘူး..
အန်တီ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဝတ်စားဆင်ယင်မှူဟာ နေပုံထိုင်ပုံတွေဟာ ဂုဏ်သရေရှိ လူတန်းစားအလိုက်ကွဲပြားတယ်ဆိုတာတော့ အသက်၄၀ကျော်ရှိတဲ့အန်တီသိမှာပါနော်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့က လူငယ်ပေမဲ့ ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းပေမဲ့ကိုယ်လုပ်တဲ့အပြုအမှူ အပြောအဆို ကို ထိန်းသိမ်းပါတယ် ကိုယ့်ကြောင့်နိုင်ငံ့ ဂုဏ်သိက္ခာမကျဆင်းအောင်ဂရုစိုက်ပါတယ်။
ဘယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဆိုပေမဲ့ အနဲဆုံးတော့ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဖူးသူတွေ လေးစားအထင်ကြီးစေချင်တာပါ..
ဒီနိုင်ငံမှာလဲ လူအတန်းအစားပေါ်လိုက်ပြီး ၀တ်ပုံစားပုံကွာခြားပါတယ်.ဒီလောက်ဆိုအန်တီနားလည်ပါပြီနော်
အနော်နီးမတ်လို့ လျို့ ဝှက်နေတဲ့ သူငယ်မ၊ လူ့့ အသက်အပိုင်းအခြား ၄၀ကျော် ၅၀ကျော် ၆၀ကျော် ဆိုတာ ဘုရားတရားမြဲသင့်တဲ့ အချိန်ပါ။ ဒီအသက်ပိုင်းခြား မှာ မွေးလာသူတွေ က အလွန် မြန်မာယဉ်ကျေးမှု့လိုက်နာတဲ့ generation. မြန်မာပြည်အပြင်ဘက် ရောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း မင်းလို အဟိတ်တိရိစာန်စိတ်(စား၊သောက်၊ကာမ ဘဲသိတဲ့စိတ်)လိုမျိုး မထားကြဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေ အလွန်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ အများကြီးဘဲ။ မင်းသာ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ပြီး မင်းဘာသာနဲ့ ဆန့် ကျင်တာ လုပ်နေတယ်။ မင်းကိုယ်တိုင်က ပျက်စီးနေတာ ကို ပိုပျက်စီးမှု့ များအောင် လူတကာ လိုက် စည်းရုံးနေတာ။ အေး သိပ်တော့ မဆန်းပါဘူး။ မင်းလို လူတကာနဲ့သိပ်.... ပျော်ရွှ့င်ချင်တဲ့ မိန်းမကို ဘယ်သူကများ တန်ဖိုးထား လက်ခံမလဲ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က မင်းထက် အပျော်ကြူးတော့ အိမ်ထောင် အဆက်ဆက်ဖြစ်မှာ ဘာဆန်းသလဲ၊ နေရာ ဒေသ အလိုက် နေရတာ မင်းပြောမှလား။ မဟုတ်တဲ့နေရာ မဟုတ်တဲ့ အကျင့်ကို မင်းကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ချင် နေတာ၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု့ လိုက်နာတဲ့ မိန်းမကောင်းတွေ ဖတ်တဲ့ ဒီဆိုဒ်မှာ မင်းလို ပျက်စီးနေတဲ့ အကျင့်ရှိတဲ့ သူ နဲ့ မသင့်တော်ဘူး ဆိုတာ အထပ်ထပ်ရေးလဲ ကျည်ထောက်စွပ်သလို နေမှာဘဲ ငါတော့မောတယ်။ အသက်ငယ်တဲ့ ကလေးတွေတောင် ပြောကုန်ကြပြီ။ မင်းကတော့ မင်းရဲ့အရှက်မဲ့တဲ့ အကျင့်တွေကို ထပ်ထပ်ဖေါ်ပြမှ လူတိုင်းရဲ့အော့ကြောလန် အမြင်ကပ်မှု့ ကို ဂုဏ်ယူနေမဲ့ မိန်းမတဦးပေဘဲ။ မြင်သူမရှက် ယိုသူရှက်။ မင်းစာအရ မင်းမိဘက မနိုင်လို့ လွှတ်ထားရတဲ့ အရှက်မဲ့တဲ့မင်းကို ငါတို့ ဘာမှထပ်ရေးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဒါနောက်ဆုံးဘဲ။ စာဖတ်သူတိုင်းအတွေးပေါက် လာမှာက တော့ မင်းတောင် မင်းမွေးတဲ့သားနဲ့ ကင်းပါစ
ဘုရားတရား မြဲတာ နဲ့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းတာ နဲ့တစ်ခြားစီပဲ လို့ကိုယ်ပြောပြီးသားလေ...
မွတ်စလင် ကိစ္စကို အသာထားလိုက်ပါအုံး..ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း လုပ်တယ်ဆိုပြီး Burmar တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း က စွပ်စွဲနေမှ ဖြင့် ..ဟင်းဟင်း.
အခုတောင် Modern မွတ်စလင် အမျိုးသမီးတွေ တောင်းဆိုကုန်ပြီ သိရဲ့ လား .
ကိုယ်တစ်ချက်စီ ရှင်းပြထားတဲ့ ကိစ္စတွေ ကို ဘယ်သူမ လက်မခံနိုင်ဘူးလဲ .. လက်မခံနိုင်ရင် ဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်သလဲ ၀င်ရှင်းလိုက်..
၀င်ဆွေးနွေးလိုက် ...ကိုယ့် ဘက်က အယူ အဆကို တင်ပြ..ဘာကြောင့်တော့ ဖြင့် ဒီဟာကို လက်ခံထားသလဲ ..ဘာကြောင့်တော့ဖြင့် ဒီဟာကို
ဘာသာရေး လို လို ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု လိုလို ပေါက်ပန်း ၄၀ပြော၊ ကလေးတွေ တောင် ရေးကုန်ပြီ လို့ အော်ကြက် လုပ်နေမဲ့ အစား၊ သူများ စီဘောက်စ်မှာ ကိုယ်ရေးထားတာ သွားကြည့်ပြီးပြီလား
အော်နေမဲ့ အစား...ဆွေးနွေးမှု မြောက် အောင် ရေးလိုက်စမ်းပါ.." ..Burmar တို့ ကတော့ ဟေ့ ....မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာတရားအရတော့ ဖြင့် ပြည်ပမှာ ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ
ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရာမှာ G string ၀တ်ပြီးသွားတာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လားလား မအပ်စပ်ဘူး " ဘာကြောင့်မအပ်စအဲသလိုမျိုး ပေါ့လေ..ကိုယ်ထင်တဲ့ အမြင်ကို တင်ပြရတယ်....
အိုင်ရဲ့ယူ
ဆွေးနွေးတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ မိဆုံးမ ဖဆုံးမ ဘွဲ့ ခံယူထားတဲ့ မိဆုံးမ ဖဆုံးမ သားသမီးလေးတွေ ပြည်ပရောက်သွားတော့ ဟို ယောက်ျားလေးနဲ့ အတူနေ၊
ဒီမိန်းကလေး နဲ့ အတူနေ ..ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာဟာ...အလွန်တော်တဲ့ မိဆုံးမ ဖဆုံးမ မိဘတွေကြောင့်လား...
ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေး အခေါ်တွေကြောင့် ပဲလား.
ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ် အပေါ်မှာ ရေးထားခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ကာမပိုင်မရှိ ဆိုတဲ့ အယူအဆကြောင့်လား..
အဲဒါဆိုရင် ငါးပါးသီလထဲက ကာမေသု ဆိုတာကြီးကို ကျူးလွန်နေကြပြီလား.. ဘာသာရေးပါလာပြီနော်...
ဟင်းဟင်း..ယဉ်ကျေးမှု အပိုင်းနဲ့ဘာသာရေးအပိုင်း ပေါ့လေ...
လုပ်ပါအုံး အမြင်လေးတွေ .
ကိုယ်ရေးထားတဲ့ အထဲမှာ လုပ်ရမယ်လို့အားပေးအားမြှောက်ထားတာ တစ်ခုမှ မပါဘူး..
.ဒီအမြင်လေးတွေကတော့ မြန်မာပြည် တွင်းမှာ ဆိုရင်တော့ ဟင်းဟင်း.. လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး ထင်ပါရဲ့ ..
ဒါကတော့ Burmar 1988 ဆိုသူအတွက်
ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ ခါးဝတ်ပုဆိုးလို လုံခြုံရမဲ့ သီလ ၅ ပါးထဲက ကာမေသုပေါ့လေ...
ဆိုကြပါစို့ ...လင်မယား ၂ ယောက် ...မယားလုပ်တဲ့သူက လင်ယောက်ျား ဖြစ်တဲ့သူကို
မြေတောင်မြှောက်ပေးထားတယ်...နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်မင်းသားပေ့ါ ..လင်ဖြစ်သူကလည်း မယားအပေါ် သစ္စာရှိတယ်...
ကံအားလျော်စွာပဲ သူတို့ မှာ သားသမီး မရကြဘူး...အဲဒီတော့ ..လင်ဖြစ်သူဟာ တစ်ခြား အမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့ 
အကြောင်းပါတယ် ဆိုကြပါစို့.. အဲဒီ ကိစ္စကို မယားလုပ်တဲ့ သူကလည်း ကြည်ဖြူစွာနဲ့ ခွင့်လွှတ်တယ်..
နားလည်ပေးတယ်... ဒါဆိုရင် အဲဒီ လို မျိုး တစ်ခြား အမျိုးသမီးနဲ့ အကြောင်းပါနေတဲ့ လင်ယောက်ျား နဲ့ 
အဲဒီ အမျိုး သမီးတို့ ဟာ ကာမေသု ကံကြီးကို သိရက်သားနဲ့ ကျူးလွန်နေကြပြီ လို့ ဆိုနိုင်မလား..
ယဉ်ကျေးမှု ကို မြတ်နိုးပါတယ် ဆိုတဲ့ ၊ ဘာသာတရားကို လေးစားပါတယ် ဆိုတဲ့ Burmar ကို
ယဉ်ကျေးမှု ရှုထောင့် နဲ့ ဘာသာတရား ရှုထောင့် က ဖြေကြားပေးပါလား..
ဆွေးနွေးတာပေါ့လေ.. မဖြေလဲ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ်ပဲ ဖြေပေးပါ့မယ်..
Your post is complete and nice.
You wrote about men, but your audience is discussing seriously about women.
့နောက်တစ်ခု ပို့ လိုက်တယ် ဖြေပေးပါအုံး. Burmar ကြီးရယ် ..နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းတယ် သိလား .
သားအမိ ၃ ယောက်ရှိပါသတဲ့ .. အဖေ ၊ အမေ နဲ့သမီးလေး ပေါ့.. သမီးလေးဟာ အဖ ၊ အမိ အုပ်ထိန်းမှု အောက်မှာ နေထိုင်တဲ့
ကာမပိုင်ရှိ သမီးလေးပေါ့ကွယ်.. တစ်အိမ်တည်း အတူတူနေတာ..
တစ်နေ့အဖေဟာ မူးမူးနဲ့ အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာသတဲ့ ..အဲဒီအချိန်မှာ ပဲ သမီးလေးဟာ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ ပဲ
ခေါင်းကိုက်လို့ဆိုပြီး အိပ်ဆေးတွေ သောက်ပြီး အိပ်နေသပေါ့ကွယ်.. အမေကြီးကလည်း ကိစ္စလေး ရှိလို့ အပြင်ထွက်
သွားတယ် ဆိုပါစို့ . အဲဒီမှာ အဖေကြီးဟာ အခန်းမှား ၀င်မိပြီး သမီးအရင်းခေါက်ခေါက် နဲ့ မှားယွင်းပါလေရာကွယ်..
အဲဒါကို အပြင်သွားနေတဲ့ အမေဖြစ်တဲ့သူ ပြန်လာတဲ့ အချိန်နဲ့ ပက်ပင်းတိုး ပါလေရော ...
ဒါပေမဲ့ အမေကလည်း ခွင့်လွှတ်တယ် .. သမီးကလည်း ခွင့်လွှတ်တယ် ...
အဟင်း...ယဉ်ကျေးမှု ရှုထောင့်နဲ့ဘာသာရေး ရှုထောင့်လေး လုပ်ပါအုံး.. အဲဒီ အဖေကြီးမှာ ကာမေသု ကံ ထိုက်သလား ဆိုတာ
ထိုက်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့်လဲ .. မထိုက်ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့်လဲ .ဆိုတာလဲ ရှင်းပြပါအုံး ...
မဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လို့ တော့ မပြောနဲ့ နော..အပြင်လောကမှာ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိသေးတယ်.
ကျမ အဲလို ကော်မင့်တွေမှာ ၀င်ငြင်းလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူများတွေဆွေးနွေးငြင်းခုန်တာကိုတော့ အဖြေတခုရလိုရငြား ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အခု အနောနီးမတ်ရဲ့ ပြဿနာကတော့ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အမျိုးသမီးဝါဒလို့ အော်လွန်းနေသလိုပဲ။ တချို့နေရာတွေမှာ တော်တော်လွဲနေတာ..ထားပါတော့ ..ခု အနောနိမတ်ရေးတာတွေကို ဖတ်ရင်း ကျမ သတိရနေတာတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မြန်မာဝတ်စုံကို အများဆုံးဝတ်တာ၊ ဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ်မ၀တ်တာတွေရယ်ြေ့ကာင့် နိုင်ငံခြားသားတွေက တအံ့အသြ ချီးကျူးရပါသတဲ့။ အဲလိုပဲ ဒေါ်စုဟာ အရက်လည်းမသောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အောင်မြင်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ရခဲံပါတယ်။ နောက်တယောက် ဥပမာ ပေးချင်တာကတော့ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ပါ။ နေရာတိုင်းမှာ ကရင်ရိုးရာအကျီင်္နဲ့ ။သိပ်အေးတဲ့ ဒေသတွေရောက်တော့ အပေါ်က ကုတ်အကျီင်္ထပ်ဝတ်လိုက်တာပဲ။ ကျမအထင်တော့ အနောနီမတ်ပြောသလို အထူးအဆန်းအကောင်တကောင်လို့ ၀ိုင်းကြည့်ခံ၇တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးက အဲလောက် မညံ့တော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ နေထိုင်မှု adjust လုပ်တဲ့နေရာမှာ ခံယူချက် adjust လုပ်စရာ မလိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးတွေ ပါလာပြီ ထင်ပါ့...
ဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကိုပဲ ကြည့်ပါ..
ဆရာကြီးကို မြင်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံတိုင်းမှာ ပုဆိုးကို အမြဲတမ်းဝတ်တယ်...အဲဒါပေမဲ့ ..ပုဆိုးအတွင်းမှာ ဘောင်းဘီ အရှည်တော့ ၀တ်ထားပါသေးတယ်..
ဒါဟာ လည်း Adjust လုပ်တာတစ်မျိုးပါပဲ.
မမေငြိမ်း ပြောသလိုပဲ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ကရင်အင်္ကျီဝတ်တယ်..အေးရင် ကုတ် အင်္ကျီအပေါ်က ကပ်ဝတ်တယ်... မအေးဘူးထင်ရင် ကရင်အင်္ကျီနဲ့ ပဲနေတယ်...ဒါလည်း Adjust လုပ်နေတာပဲလေ..လိုအပ်လို့ Adjust လုပ်တယ်..မလိုအပ်ရင် မလုပ်ဘူး...
-မုတ်သုန်ရာသီဥဆုလို နေရာမျိုးမှာ မပြောသာဘူးလို့ ရေးထားပြီးသား..ဥရောပလို ...ရုရှလို ..ကနေဒါလို နေရာမျိုးမှာ ဆိုရင် ပုဆိုးဟောင်းလောင်း ၊ ထမိန်ဟောင်းလောင်း နဲ့ နေလို့ ရပါ့မလား...
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အမေစုကို ဒီနေရာမှာ မဆွေးနွေးပါနဲ့ ..ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်နဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အတွက် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေတာပါ...
စံထားတဲ့ သူတစ်ယေက်ကို ပြတယ်ဆိုရင် မမေငြိမ်း စံလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူလို မှီအောင် နေနိုင်ပါ့မလား...မမှီသည့်တိုင်အောင် Adjust လုပ်နိုင်တဲ့ ဟာလေးတွေ လုပ်ထားမယ် လို့ ထင်ပါတယ်..အဲဒါဆိုရင် မမေငြိမ်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ အနေနဲ့ရိုးရာ ချိတ်ထမီ နဲ့ရင်ဖုံး အင်္ကျီ လေးနဲ့ Shopping တို့အလုပ်သွားတဲ့ အခါတိုင်းမှာ ၀တ်ပြီးသွားပါသလား...
မမေငြိမ်း ပြည်ပထွက်တယ်...တိုင်းပြည်လွတ်မြောက် ရေးအတွက် စာပေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တယ်.. ဒါက ကိုယ့်ခံယူချက်ပဲ ...ဟုတ်ပြီ...တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေး ရသွားပြီပဲ ဆိုကြပါစို့ ...တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်
ခံယူချက်ကို မပြောင်းဘူး ဆိုရင်ပေါ့လေ..
ကျောာင်းသားလူငယ်တွေ ပြည်ပထွက်တယ်..ပညာတတ် တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကျိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ထွက်တယ်..သူတို့ ခံယူချက်ကို ပြောင်းသလား...မပြောင်းဘူး....ဘယ်သူမှ လည်းမပြောင်းပါဘူး... အဲ...သင်ကြားလေ့လာရာမှာ ပြောင်းတယ်....မြန်မာပြည်က ကြက်တူရွေးစာကျက်သလို နှုတ်တိုက် ရွတ်လာတဲ့ အမူအကျင့်တွေ နဲ့ပြည်ပမှာ လေ့လာလို့ ရပါ့မလား..
သင်ကြားမှု လေ့လာမှု Style ကို Adjust လုပ်လိုက်ရတာပဲလေ... .
မမေငြိမ်း ဆွေးနွေးမှု ကို လေးစားပါတယ်..
အမျိုးသမီးချင်းငြင်းရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမပြောချင်တာကို သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။ နေထိုင်မှု adjust လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေထိုင်မှု adjust မလုပ်ရင် အထူးအဆန်းကောင်တကောင်လို ၀ိုင်းကြည့်ခံရတယ်..ဆိုတာကို ကျမဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အရက်မသောက်ရင် ရိုင်းတယ်လို့ အသတ်မှတ်ခံရတာကို ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ ဒါ့ထက်ပိုမပြောပါ။ ကျမအကြောင်း ပြောစရာလည်း ကိစ္စ မပါပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမက ပြည်တွင်းမှာ လက်ထောက်ကထိကလုပ်နေတာတောင် ခရီးသွားတဲ့အခါ လိုအပ်တယ်ထင်လို့ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ သွားတဲ့ကောင်ပါ။ ခု ဒီဘက်ရောက်တော့ နွေဆို စကတ်တောင် ၀တ်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျမက သောက်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကို အပြစ်မြင်တတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါ။ အရက်အရမ်းသောက်ရင်တော့ ဘသူသောက်တာကိုမှ မကြိုက်ပါ။ ကျမ အရက်မသောက်တာ စံပြဖြစ်ချင်လို့ မဟုတ်ပါ။ ခါးတာကို မကြိုက်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ တနေရာရာမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ မှန်းထားရင်တော့ ကိုယ်ခေါင်းဆောင်ချင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရစံပြဖြစ်အောင်နေဖို့ ကြိုးစားမှာ သေချာပါတယ်။ ဘာအတွက်လည်းဆိုတော့ အများအသိအမှတ်ပြုထောက်ခံမှု ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ များများကွဲလွဲတာ မဟုတ်ပါ။
နောက်တခုလေးပြောချင်တာ တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးတိုက်တယ်ဆိုမှ ရသွားပီဆိုရင် ဆက်တိုက်ရဦးမလား..ပြီးတော့ ဒါ topics နဲ့လွဲတယ်။ အမျိုးသားတွေက ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကို သိပ် aggressive ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေတာ ဒါမျိုးတွေကြောင့်ပဲ။ ပြီးတော့ ကျမ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါ။ ဒေါ်စုနဲ့ ဒေါ်စင်သီယာမောင်က ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေမို့ ဥပမာ ထည့်ပေးတာသာဖြစ်ပါတယ်။
Hi....I have read all the comments and am interested in this topic. In my point of view, everyone has some correct saying but nobody is perfect. For me, if you think something is not right according to your standard, then don't do it. Sometime things that you believe are right but in the eyes of others is terribly wrong. So don't criticize others and do the things that you believe are right. Stop blaming others for not doing that also, as long as they don't harm,kill or doing things that are prohibited by Law. Somemore using words to hurts other people are really LOW STANDARD.
၂ ပိုင်းတွေ့ ရပါတယ်။ social ပိုင်းနဲ့job အလုပ်ပိုင်းပါ။
social ပိုင်းမှာမှန်ပါတယ်။ adjust လုပ်ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လဲ အင်္ဂလန်မှာအရမ်းအေးတဲ့ winter မှာမြန်မာအကျီ င်္ထမီနဲ့ နေရတာခက်ပါလိမ့်မယ်။
အရက်မသောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ယောကျာင်္းမိန်းမတွေလဲအများကြီးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘဲ Staff Party မှာ အရက်မသောက်တဲ့သူတွေ တွေ့ ရပါတယ်။ အများစုက control နဲ့ သောက်ပါတယ်။ safety အတွက်ကြည့်ပါတယ်။မြန်မာအများစုဟာအားနာတတ်ပါတယ်။
်အားနာပြီးတော်ပြီမပြောဝံ့ကြပါဘူး။ကိုယ်ကတော်ပြီပြောရင်ဘယ်သူကမှရှေ့မဆက်ရဲပါဘူ။မြန်မာလူမျိုးရဲ့ အားနည်းချက်ပါဘဲ။ဘာလုပ်လုပ်ပြောပြော control နဲ့safety အတွက်သေသေသတ်သတ်လုပ်ရင်ချမ်းသာလာကြမှပါဘဲ။
Job အနေနဲ့ အင်္ဂလန်မှာတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ နိုင်းယှဉ်ရင်မိန်းမတွေအလုပ်ပိုလုပ်ပါတယ်။ ဒီမှာက ပင်စင်ကောင်းကောင်းကအလုပ်ကောင်းမှဆိုတာအကုန်သိထားကြပါ
်တယ်။ ကလေးရှိရင်တောင်ကလေးကိုကလေးထိန်းတနေရာရာမှာထားပြီးရှေ့ ပင်စင်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ သူတို့ ကလေးတွေနဲ့ အတူနေချင်ကြပါတယ်။ကလေးထိန်းခဈေးကြီးပါတယ်။နောက်တခု က မြန်မာပြည်မှာလို အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးကြီးနဲ့ မနေရပါဘူး။အလုပ်မလုပ်ရင်တနေကုန်တယောက်ထဲနေရပါတယ်။ထောင်ကျသလိုပါဘဲ။အားချိန်တွေများပြီး internet, telephone ကြိက်သလိုသုံးလို့ ရတဲ့နိုင်ငံမှာကြာလာရင်ဖေါက်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။
ရာသီဥတုကလည်း မြန်မာပြည်လို အပြင်မှာလင်းနေတာမဟုတ်တော့ ယောကျာင်္းမိန်းမအလုပ်လုပ်ပြီးနေကြတာများပါတယ်။
နောက်ပြီး မိန်းမ အိမ်မှုကိစ္စအောက်ခြေသိမ်းလုပ်ရတာမြန်မာတနိုင်ငံထဲမဟုတ်ပါ။ အာရပ်နိုင်ငံတွေကစလို့ ဂျပန်ထိ အာရှတလွှားပါ။ အရှေ့ တောင်အာရှကတောင်နဲနဲသာပါသေးတယ်။
ဘာဘဲပြောပြောယောကျာင်္းမိန်းမ မိမိနှစ်သက်ရာ မိမိပညာရေးနဲ့ ကိုက်ညီရာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။အချင်းချင်းပြိုင်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
အိမ်မှာလဲ မိန်းမဟင်းချက်ရင် ဈေးဝယ် ပန်းကန်ဆေးပေး သန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်ရင် ပြိုင်စရာမရှိတော့ပါ။
ယောကျာင်္းမိန်းမ ၂ ဦးလုံးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ..ကျမ အသက် ၂၄ပါ။ ကျမ အရက်လဲ Social သောက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လဲ Clubbing တခါတလေ သွားပါတယ်။ ရည်းစားဆိုတာက ကျမအတွက်တော့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပါ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ တချို့ သောလူသားတွေသည် ကျမလောက်တောင် လောကကြီး အတွက် အသုံး မ၀င်လို့ ပါ။ ယောကျားတော်တော်များများထက် မသာရင်တောင် မလှော့သော အရေအချင်း ကျမမှာရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်အခြေအနေထိ ကျိုးစားခဲ့တယ် ကျိုးစားနေတယ်ဆိုတာကို ကျမကို သေချာသိတဲ့ သူ တွေသိပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့ .. လူတွေဆိုတာ ကိုယ်ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပီး အတွေးအခေါ် ခံယူချက်ကွာသွားတာပါပဲ။ လိုက်ညှိ နေလို့ ကတော့ ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေပဲ ကိုယ်အရင် ကြည့်လိုက်လေ။ ညီမှ မညီတာ။ ဖြတ်ပြစ်လို့ရမလား။ တိုတဲ့ လက်ချောင်းလဲ သူ့ နေရာနဲ့ သူ အသုံး ၀င်သလို့ရှည်တဲ့ လက်ချောင်းလဲ အသုံး ၀င်တာပဲ။ Everything happened for reason. Open mind လေးနဲ့ အရာအားလုံးကို အစွန်း မရောက်ပဲ ကြည့်သင့်တယ် ထင်ပါတယ
burma 1988,your idea ,the way your talking is very rude . you are very conservative person. U attacked somebody who is not the same idea with u with very strong words.I don't want to think that political man are like you. If you will be the presedent of our country one day, u will treat the woman like woman in Afganisstan.
dear Daw Khin Min Zaw
Once uponatime, when u gave comments about the famous actor,I strongly agreed with u.
But this time, the way u judge on the woman is not fair at all. First of all, How do u distinguish between working girl and reckless girl at first sight?.
Nowadys, when we are studying outside we need to try hard bec our background knowledge is not strong.We have to work hard two or three times more than resident student.If woman studied engineering or advance techanology she will studied among the man(Especially in japan, some of the engineering lab, they have no or only one woman in graduate program). So most of her friends will be the man. She will stay the laboratory the whole day until late night and go for dinner or lunch with her male friends from the lab.According to myanmar point of view, she stays with man the whole day and came back night very late, go out dinner with male friends everyday.Is she bad girl?can you judge immediately.
At university surrounding, they always arrange party after finishing the research work or gaining some new things. They appointed each other to meet at 8 or 8:30 bec every student finish their work at that time. They went some restaurant or club at night,if she never join with the friends,she seemed --- not appreciate the success of her colligue. She avoide the many occasion ,after that she will be isolated in her surrounding. In research work, She need team work and according to nature of research,good relation between one another is very important. So she need to go out the party sometime and adjust with the surrounding. No need to drink all the time, but she have to drinkalittle bit or pretend to drink sometime.They never force the female student to drink, but some special occasion especially for her sucess, most of her teacher and friend raised the cup of wine or beer to cheer her and her professor gave her one cup of wine for honor her success,at that time should she refuse this?At least she pretand to drink or drinkalittle bit is better for her friends.
The woman who work among the man , she need to be very strong. She need to be decisive, argumental and strong minded.Man who want to marry with this kind of woman, he must be better than this woman. On the other hand , if he is something worng, she will complain him alot. So this is up to the man, will he marry the strong girl or quiet girl? If the woman complained her hubby when she find out the bad things of him, will she be bad woman?
My opnion is that woman should have the equal right with man. Woman must respect to her hubby but she has the right to complain when he is wrong. We must respect to our national costume but sometime we need to wear the formal suit and shoes.(Normally formal skirt are short around knees). When we work outside, we want to wear jeans and T shirt for convenience. We have the chance to choose the right man for us.she love the man who was thought to be reliable and good, After that he is not good and she broke up with him and found another one.Is she bad or should she tolerate this man the whole of her life?
What is ur standard to judge the girl? If she is not match with your ruler, you decided that she is bad, like this? Everybody has their own standing point.First time you told something and second time you confused ur words.
Burma 1988: U r so rude and the words u use are not logical at all. U should respectalittle bit to Ma Kun Mya Hlaing blog. The reader can argue each other in this blog politely . Why did u attack personally to other person? I think that you may know each other outside very well ( i don't know it's true or not). But you shouldn't use very rude words when u argue with somebody. Even u want the mm girl to be very polite and well behaved, but ur behavior is so disguising.
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ၊ ဘာသာတရား၊
ပဝေသဏီကနေ စပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ပုပင်းအင်တောင် ညောင်ရမ်းနောင် ကုန်းဘောင်ကိုလိုနီ ဆိုတဲ့ ခေတ်တစ်ခုခု ထဲက တစ်ခုပေါ့..ပုဂံခေတ်လို့ ပဲထားပါစို့ 
အဲဒီခေတ်မှာ..နှစ်သစ်ကူးလို့သင်္ကြန်ကျပြီ... ရေကစားကြတယ်... အဲဒီခေတ်အဲဒီအခါက သပြေခက်နဲ့ငွေဖလားနဲ့ နံသာရေလေး ဖြောပြီး ရေပက်တယ်.. အခုခေတ်မှာ သပြေခက်နဲ့ ရေ မပက်ကြတော့ဘူး..ပိုက်တွေ ၊ မီးသတ်ပိုက်တွေ နဲ့ ထိုးကြတယ်... အဲဒီခေတ်တုန်းက မီးသတ်ပိုက်မရှိလို့ယူဆမယ်ဆိုရင် သူတို့ လည်း ငွေဖလားနဲ့ ခွက်စောင်းခုတ်မလားလို့ ပြောရမလားပဲ...
အဲဒီလို သပြေခက်နဲ့ ရေပက်တာကို ယဉ်ကျေးမှု လို့ပြောမယ်ဆိုရင် အခုမျက်မှောက်ခေတ်မှာ ရေကစားသူ အားလုံးဟာ ယဉ်ကျေးမှု မရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလို့ ပြောလို့ ရမလား... မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန် လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မီးသတ်ပိုက်နဲ့ထိုးနေတယ်..အထိုးခံချင်လို့ အဲဒီမီးသတ်ပိုက် ရှိတဲ့ မဏ္ဍပ်ရှေ့မှာ ကားတွေ စုပြုံပြီး တန်းစီနေကြသူတွေ အားလုံးကို ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မထိန်းဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မပြောပါ.... (တစ်ခေတ်မှာ တစ်ခါ ရှားရှားပါးပါး NLD က ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ကို ကြုံဖူးသူတိုင်း ပုဂံခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားမလား မပြောတတ်ဘူး...အတာအိုးထဲမှာ သပြေခက်ထည့်ပြီး သပြေခက်နဲ့ရေပက်ခဲ့တယ်.. စတုဒီသာ လည်းကျွေးတယ်.. စတုဒီသာ ကျွေးတာထားလိုက်ပါ...ဒါက အမှတ်တရ အနေနဲ့ ပြောပြတာပါ)
ကိုလိုနီခေတ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ဦး ဘုရားပေါ်ကို ဖိနပ်စီးပြီးတက်ခဲ့တယ်..အဲဒီခေတ်အခါက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ အဲဒီကိစ္စကို ပြင်းပြင်းအထန်ကန့် ကွက်ခဲ့တယ်...ဘုရားပေါ်ကို ဖိနပ်စီးပြီးတက်ခဲ့လို့ ...
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဘုရားပေါ်ကို မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဂျင်းဘောင်ဘီ ၀တ်တက်တယ်..စကပ်ဝတ်တက်တယ်..
ဘုရားပေါ်မှာလည်း ဂေါပက အဖွဲ့ ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်က အပြူးသား...ယဉ်ကျေးမှု ကို ထိန်းသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ စကပ်ဝတ်တက်ခြင်း ခွင့်မပြုပါ...ဘေးနားမှာ ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားလုံခြုံရေးစောင့်တဲ့ အမျိုးသမီးက လုံခြုံရေး စကပ်ကြီးနဲ့ ...ဟုတ်ပြီ...ဘုရားကို နိုင်ငံခြားသားတွေ လာဖူးမျှော်ကြတယ်..အရှေ့ တိုင်းသူ ဘောင်းဘီဝတ်တယ်..စကပ်ဝတ်တယ်... သူတို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ကို ချိုးဖောက်နေပါတယ်..ဘယ်သူမှ မပြောပါ...စကပ်ဝတ်တက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကို လည်း ဘုရားပေါ်က ဆွဲချတယ်လို့ မကြားမိပါဘူး..
ပြည်တွင်းမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ယခင့်ယခင်အချိန်တွေတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်း ပရ၀ုတ်မှာတောင် ဖိနပ်စီးခွင့် လုံးဝ ခွင့်မပြုဘူး...ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပရ၀ုတ်အတွင်းမှာ လည်း စီးနေကြပြီ...ဘုန်းကြီးကျောင်းထိုင် ကိုယ်တိုင်က ဒကာကြီး..ဒကာမကြီးတို့ စီးကြ..စီးကြ...ဖုန်တွေသဲတွေ ပေမယ်...ဆူးတွေစူးမယ်...ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖိနပ်ချွတ်မှာပဲ ဖိနပ်တွေ ချွတ်ခဲ့ကြ...
ပြည်ပမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားကြတဲ့ မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ..ဘုန်းကြီးကျောင်းရယ်လို့ သီးသန့် ရှိတဲ့ ကျောင်း ခပ်နည်းနည်းပါ...ဥရောပလို နေရာကို ဆိုလိုပါတယ်...စင်္ကာပူလို ..ထိုင်းလို နေရာမျိုးကို မဆိုလိုပါ...အဲဒီမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်ကို ဖိနပ်ချွတ်ပြီးတက်တယ်...အင်း..ခြေအိတ်တော့ ၀တ်ထားတယ်..ခြေအိတ်စွပ်ရက်နဲ့ ပဲ ဘုရားဝတ်ပြုကြ၊ ဘုန်းကြီး ဦးချကြ လုပ်တယ်. ထိုင်း နိုင်ငံ မြဘုရားမှာ ခြေအိတ်စွပ် ၀တ်လို့ ရတယ် ထင်ပါ့..မှားရင်လည်း မှားမှာပေါ့.....အဲဒီ မြန်မာတွေကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မလိုက်နာ..ဘာသာတရား မလေးစား ဘူးလို့ ပြောလို့ ရနိုင်ပါ့မလား...
ဒီဘလော့ရဲ့ တစ်နေရာမှာ " အိမ်မှာ အဖေနဲ့ အမေ အတွက် စားဖို့ ဆန်မရှိလို့ ..လူကို ကြိုက်သလို လုပ်ပါ" လို့ ဘလော့ပိုင် ရှင် ရေးထားတဲ့ ပို့ စ် တစ်ခု ရှိပါတယ်...ဟုတ်ပြီ..အဖေနဲ့ အမေကို လုပ်ကျွေးနေတယ်..ထားတော့...အခုခေတ် မော်ဒယ်လ်တွေ ၊ ကွယ်ရာအိုကေ မှာ လုပ်စားနေကြတယ်... အရှင်းဆုံးပြောရရင် အဆင့်မြင့် ပြည့်တန်ဆာ...သူတို့ တွေဟာ မှောင်ခို မချဘူး..မခိုးမ၀ှက်ဘူး...သူများပစ္စည်း မတရား မသိမ်းပိုက်ဘူး...အဲဒီလို အမျိုးသမီးတွေကို မင်းတို့ ဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ကို ဖျက်ဆီးနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လို့ သမုတ်ကြမလား...ကာယအိနြေ္ဒမဲ့ တဲ့ အမျိုးသမီးတွေလို့ သမုတ်အုံးမလား...သူတို့ နဲ့ ပျော်ပါးတဲ့ ကာမပိုင် ရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေကိုကော ဘာသာတရားအရ ငါးပါးသီလထဲက ကာမေသု ဆိုတဲ့ ကံနဲ့စွပ်စွဲမယ်ဆိုရင်ကော...ကာမပိုင် မိန်းမကွယ်ရာမှာ ဖောက်ပြန်သော မိန်းမဆိုပြီး....။
ဘုရားရှင် လက်ထက်မှာလည်း ပြည့်တန်ဆာတွေ ရှိပါတယ်...တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ ဘုရင်တွေကတောင် ဘွဲ့ တွေချီးမြှင့်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်...
ပဝေသဏီက ၃ နှစ် ၃မိုး ဆိုတာ ရှိပါတယ်.. ကောင်လေးလုပ်တဲ့ သူဟာ ကိုယ်ချစ်ခင် နှစ်သက်တဲ့ ကောင်မလေး ကို စိတ်တိုင်းကျ စောင့်ကြည့်ချင်လို့ ..ကောင်မလေးရဲ့ မိဘအိမ်ကို သွားလာ ၀င်ထွက် တယ်..
အနေအထိုင် အပြုအမူတွေ အကဲခတ်ရတယ်.. သူက လုပ်ကျွေးရမဲ့သူလို့ ဒီလို အကဲခတ်သလား ကာယအိနြေ္ဒ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ ယူတော့မှာလား...
ဒီဘက်ခေတ်မှာ အဲဒီ ၃ နှစ် ၃မိုး ရှားသွားပြီ....ခုမြင် ၊ ခုကြိုက် ခေတ်ကြီး ဖြစ်လာပြီ...ကာယအိနြေ္ဒတွေ ကို မိန်းကလေးတွေ ထိန်းသိမ်းတာ အရမ်းတော်နေလို့ လား..အိမ်ထောင် ထိန်းသိမ်းမှု တွေ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် တတ်နေလို့ ပဲ အမျိုးသားတွေက ၃ နှစ် ၃မိုး မစောင့်ဘဲ ယူကြသလား...ဒါမှ မဟုတ် သူလည်း အလုပ်လုပ် ၊ ကိုယ်လည်း အလုပ်လုပ်တဲ့ ခေတ်မို့ လို့ ကိုယ်ရှာကျွေးရမဲ့ တာဝန်ကင်းသွားပြီ မို့ လို့ လား...
ဒါဆိုရင် လင့်ကျင့်ဝတ်ထဲက အပ်နှင်း ဥစ္စာ ဆိုတာကြီး ဘယ်နား သွားထားရမလဲ...အဲဒီယောက်ျား သွားပြီပေါ့..
ပြည်ပမှာ နေထိုင်တဲ့ သူတွေ...ပဝေသဏီ ခေတ်ကို ပြန်လည်တူးဖော်နေကြတယ်...မြန်မာပြည်က မိဆုံးမ ၊ ဖဆုံးမ ခံထားရတဲ့ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ တွေ Sex ဆိုတဲ့ ဟာ နဲ့ ပတ်သက်မှု လုံးဝ မရှိတဲ့သူတွေ ပြည်ပမှာ မီးတွေ ပွင့်ကုန်ကြတယ်...ဒါဆိုရင် မြန်မာပြည်က ကျန်ခဲ့တဲ့ အဆုံးအမပေးခဲ့တဲ့ မိဘတွေဟာ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဘွဲ့ ကို ခံကြရတော့မလား...မီးပွင့်ကုန်တဲ့ သူတွေကကော မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ သားသမီး ဆိုပြီး ဖြစ်ကုန်ရောလား....Living Together ဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်းအယူအဆကို အခုခေတ်မှ မြန်မာတွေ ဟာ ကျင့်သုံးတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပြောချင်လို့ပဝေသဏီ ၃ နှစ် ၃မိုးကို အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တာပါ...
အဲဒီခေတ်က လူကြီးမိဘ အိမ်မှာ နေရတဲ့အတွက် အတူနေခွင့်မရတာက လွဲလို့ ပေါ့..
ဒါဆိုရင် ပြည်ပရောက် မြန်မာအမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး Living Together နေတာကြီးဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လားလား မအပ်စပ်ဘူး..မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဖောက်ပြီး အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကို လက်ခံထားတယ်လို့ သတ်မှတ်မလား...သူတို့ Adjust လုပ်ထား ပါသေးတယ်..
မိဆုံးမ ဖဆုံးမ သမီးလေးတွေက မြန်မာပြည်က မိဆုံးမ ဖဆုံးမ အမေနဲ့ တိုင်ပင်ကြတာပေါ့..
.အမေရေ..သမီးတော့ ပြည်ပမှာ ကောင်လေးနဲ့ အတူတူ အိပ်နေပြီ...မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချိုးဖောက်နေပြီလို့ တော့ မပြောပါဘူး...အမေ....သမီးတော့ စဉ်းစားရမဲ့သူတွေ့ ထားပြီ..အခုသူ့ ကိုလေ့လာနေတယ်..သမီးတို့ အတူတူနေကြတယ်..
အဲသလို တိုင်ပင်ကြမှာပေါ့....အဲဒီအခါမှာ အမေလုပ်တဲ့သူက ပါးစပ်ကြီးအဟောင်းသားနဲ့ပြောလိုက်ပုံကို မြင်မိသေးတယ်.."သမီးနဲ့ တော်မယ်ထင်ရင် လုပ်ပေါ့ကွယ်" အဟက်...အဟက်..
အဲဒီ Living Together ၂ယောက်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်အရ ကာမေသုကံကြီးကို ချိုးဖောက်နေကြပြီလို့ ပြောနိုင်ပါ့မလား...၂ယောက်လုံးဟာ အုပ်ထိန်းသူ မိဘ ရှိနေတာပဲ...
ဟိုရုပ်ရှင် မင်းသားရဲ့ အဖြစ်ဆိုရင် သူဟာ လူမှုရေး ဖောက်ပြန်သူတစ်ဦး လို့ ဆိုလို့ ရနိုင်ပါ့မလား...မယားလုပ်တဲ့သူ ကာမပိုင်ဆိုတဲ့ မယားက ကြည်ဖြူစွာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ထားပါတယ်...
ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ တရားတော်ကို နားလည်သလောက်ပေါ့လေ ..ပြောရရင်..
လူ့ ဘောင်လောက ကို ဒုက္ခမပေးဘူး ...တစ်ဘက်သားလည်း မနစ်နာဘူး...မျက်ရည်ပေါက် ကြီးငယ် လည်းမကျဘူး...ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်လို့ ရပါတယ်လို့ နားလည်တယ်...အယူမတူရင်လည်း မတူနိုင်ပါဘူး...
အဲဒီတော့...ခုနက Livingin Together ၂ ယောက်ရဲ့၂ဘက် မိဘတွေဟာ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ အဖေအမေတွေ လို့ ပြောလို့ ရမလား...ဒါမှ မဟုတ် သမီးလေးကို Sex ဆိုတဲ့ အထိအတွေ့ နဲ့ ဝေးကွာအောင် သင်ကြားမှု မပေးခဲ့တာကို အပြစ်ပြောရမလား..
ပဝေသဏီတုန်းက လင်မယားရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် မီးခွက်မှုတ် ပြီးအိပ်တယ်...ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူက ဦးဆောင်တယ်...မိန်းမလုပ်တဲ့သူ က ရှက်လို့ ...ပြီးတော့ အဲဒီ ကိစ္စတွေကို မလေ့လာထားလို့ ...လေ့လာထားရင်လည်း ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူ က ဒီမိန်းမဟာ အပျိုစစ်မှ ဟုတ်ရဲ့ လား ဆိုတာမျိုး ထင်မှာစိုးလို့ ...အဲဒီတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ ကာယအိနြေ္ဒထိန်းတယ်..အရှက်သိက္ခာ ထိန်းတဲ့ အမျိုးသမီး လို့ ခေါ်ကြတယ်...
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ...မီးခွက်မှုတ်တာအသာထားလိုက်...မီးတွေ ဘာတွေ ထွန်းကုန်ပြီ....မိန်းမက ဦးဆောင်မှုတွေ စနေပြီ...ပညာစုံ တတ်ကုန်ပြီ....လေ့လာထားလို့ ..
အဲဒီအမျိုးသမီးကို ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူက ..ဟာ..မင်းဟာ အပျိုမစစ်ဘူး...ကာယအိနြေ္ဒမထိန်းဘူး..ဒါတွေ တတ်ရအောင် မင်းဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုပြီး လင်မယားကွဲမှုတွေ ဖြစ်မလား...ဒါမှ မဟုတ်..
Oh God Oh God ဆိုပြီးတော့....အော်နေကြမလား...
အဲဒီ အမျိုးသမီးကို ပိုပြီးချစ်မလား. ..ပိုနှစ်သက်စွဲလမ်းလာမလား...သူ့ ကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ကို မထိန်းသိမ်းဘူး..ယောက်ျားက ဦးဆောင်ရမှာ ကို မင်းက ဦးဆောင်တယ်...မင်း လျှပ်ပေါ်လော်လီ လုပ်တယ် လို့ စွပ်စွဲမလား...
ရည်းစားထားတယ်....အမျိုးသမီးတွေဟာ နဂိုအရင်းခံစိတ်က မိခင်စိတ် အပြည့်နဲ့ ရှိကြတယ်..သနားတတ်တယ်..ကြင်နာတတ်တယ်...
လိမ်မှန်းသိလျက်သားနဲ့ ကို တမင် အချော့ခံခြင်ကြတယ်..
မိန်းကလေးလည်း ချစ်တတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးနဲ့ ပါ..သူတို့ ချစ်ကြိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို တွေ့ ပြီ ဆိုပါစို့ ..မိန်းမတို့ တတ်အပ်တဲ့ မာယာလို့ ပြောမလား...အဲဒါတွေ နဲ့ တစ်ဘက်လူ ကိုယ့်အပေါ် ချစ်ကြိုက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပြုမူတယ်..ပါးစပ်က ဖွင့်မပြောရဲ လို့ ...ယောက်ျားလေးကတော့ နဂိုကတည်းက ဦးဆောင်သူဆိုတော့ သူတို့ ချစ်ကြိုက်ရင် တစ်ခါတည်း ဖွင့်ပြောတာကို ပြောနေစရာမလိုပါ... အဲဒီ တတ်အပ်တဲ့ မာယာ နဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ချစ်ခင်နှစ်သက်အောင် ပြုမူတာကို ဖျားယောင်းတယ်...အရှက်မဲ့တယ်..အိနြေ္ဒ သိက္ခာမဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ ရမလား...သူလို ချင်တာ သူဖန်တီး ယူတာပဲ...မိန်းကလေး တစ်ဦးက ယောက်ျားလေးတစ်ဦးကို ရည်းစားစကား စပြောတယ်ဆိုရင် ထူးဆန်းနေမလား.. .မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အရ မလျော်ကန် မသင့်မြတ်ဘူးလို့ ပြောမလား...သိက္ခာမရှိတဲ့ မိန်းမ ၊ အရှက်မရှိတဲ့ မိန်းမလို့ ပြောမလား...အမျိုးသမီးလည်း ချစ်တတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးနဲ့ ပဲလေ...
ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ရည်းစားဖြစ်တယ်...၁ လမကြာဘူး..ကောင်လေးက ဖြတ်သွားတယ်.. .ကောင်မလေး ဆွေးပြီး၊ အသည်းကွဲပြီး ကျန်ခဲ့တယ်...
အဲဒီကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးကို ကြောရယုံ ကြံသွားတယ်...ကောင်မလေး နောက်တစ်ယောက်တွဲတယ်... အရင်ကောင်လေးက ကောင်မလေးအကြောင်း သွားပုတ်လေလွင့်ပြောတယ်..
ဒါငါအရင်က ကြိတ်ခဲ့တဲ့ ဟာပေါ့...အဲဒါကို ပြောတိုင်း ဒီမိန်းကလေး အရှက်မရှိ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲတယ် ပြောလို့ ရမလား...
မမေငြိမ်း အတွက်ပါ..အငြင်းသန်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ..
ဥရောပမှာ အီတလီ ၊ စပိန် တွေ ဟာ တော်တော်လေးကို အသားအရောင်ခွဲခြားပါတယ်...ဘောလုံးအားကစားမှာ လူမည်းတွေကို သူတို့ က မျောက်လို့ ခေါ်ပါတယ်..ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ သူတို့ မကြိုက်တဲ့ လူမည်းကို မျောက်လို အော်တဲ့ပုံမျိုး လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်...
အဲဒါကို ထောက်ပြီး ပြောတာပါ....
အရက်မသောက်ရင် ရိုင်းတယ်လို့ ပြောတာဟာ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ခံစားချက်အတိုင်း သူတို့ ရင်ထဲက ထွက်တဲ့ စကားလုံးပါ...အနောနီးမတ်စ် ပြောတဲ့ စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူး...အာရှ တစ်လွှားတော့မပြောတတ်ဘူး...
Rattle Snake said...
I think, women can do whatever that they want to do because all human are created equal unless they chose not to be equal. Those un-equality can arise (or) dictate by religion, lack of freedom, male-ego and society.
Look at middle eastern countries, they killed women by throwing stones or gang raping if they go out w/o male. Do you want your woman to be that?
Look at India. Women were forced to abort if they give birth female rather than male. In Asian country, particularly in Japan, men can sleep around with HS kids while wives stay at home and cook.
Women has been viewed as submissive creature while male were honored as macho driven. This is all tainted view. Women deserved all the rights as men. They can drink, party and do social event. If they make mistakes, that's their problems and they will learn those mistakes and won't repeat it.
Most narrow minded Burmese men want their women to be perfect i.e. no boyfriends, know how to cook and especially virgin while men sleep or flirt with other girls including prostitutes.
Some men,who didn't have this luxury of dating opposite sexes, have this fantasy of getting this perfect girl. But in deep down, they all want to get more than one girls because it'saguy thing. But they wont admit. Isn't itadouble standard?
Come on guys..wake up..this is notastone age. This is 22nd century. Even Nepolean said "the hand that rock the cradle rule the world" in honor of her mother. Ask you father...who control the house and he will tell you in whisper.."It's me! but don't let your mom know!"
PS.DASSK or that cynthia lady wear those dress because they are public figure. She has to maintain professional image at all time. Don't drag her into this because this isamutually exclusive argument. It's like dragging Hilton Clinton into throw your panties events.